February 2015 | ကမ်းလက်
in အမှတ်တရ - on 2/28/2015 - No comments
ဗိုလ်ချုပ်နှစ် ၁၀၀၊ ရှေ့ဆုံးအတန်းက အဟမ်း အဟမ်း ဓမ္မဂင်္ဂါနဲ့ ဇင်ဝေသော်
(ပေးပို့သူ Hnin Net)
အမှတ်ပေးနေတဲ့ သစ္စာနီက ဒီမှာ။ ဆောရီးပဲ။ အခုမှ ဖုန်းထဲကတွေ့ရ။
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 2/28/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared မင်းဒင်'s photo.
February 28 at 5:47pm ·
ဒါဟာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တဲ့ ။
ဂျပန်တက္ကသိုလ်နဲ့မပေါင်းခင် စာလုံးပေါင်းမှန်အောင်ပေါင်းကြပါဗျာ။ ။
ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင် အပေါင်းတို့ 
in ဘာသာရေးသတင်း - on 2/28/2015 - No comments
မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့သော အဘိဓမ္မာ ဒေသနာတော်များကို လွယ်ကူစွာ လေ့လာနိုင်စေရန်နှင့် ဓမ္မသဘာဝကို ရှင်းလင်းစွာ သိရှိပြီး မိမိတို့ ၏ နေ့ စဉ်ဘ၀များတွင် အသုံးချနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆရာတော် ဦးစက္ကပါလမှ အဘိဓမ္မာသင်တန်းကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း သင်ကြားပို့ ချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ ကြောင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်များအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓ၏ အဘိဓမ္မာ ဒေသနာတော်များကို သင်တန်းတက်ရောက် သင်ယူနိုင်ကြစေရန် နိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော် နှိုးဆော်တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
သင်တန်းပို့ ချမည့်ဆရာတော် = ဦးစက္ကပါလ (မင်္ဂလ၀ိဟာရကျောင်း)
စတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် = ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ 
အချိ်န်နှင့်နေ့ ရက် = ညနေ ၆ နာရီ မှ ၇း၃၀ နာရီထိ
(အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ တိုင်း)
သင်တန်းနေရာ = မင်္ဂလ၀ိဟာရကျောင်း (စင်္ကာပူ)၊
ဒုတိယထပ် (Chew Quee Neo hall)
30 Jalan Eunos,
သင်တန်းလမ်းညွှန် = Eunos MRT
Bus 7, 15, 21, 60, 67, 93, 854
ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေဖြင့် အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များနှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ လည်း ဆက်သွယ် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြပါကြောင်း အသ်ိပေး တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်။ ။ ၉၁၆၃၁၅၂၉၊ ၈၁၉၁၀၈၂၂
မှတ်ချက်။ ။သင်တန်းသည် ဓမ္မဒါနအဖြစ် သင်ကြားပေးသော အခမဲ့ သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
မနက်ဖြန် ညနေ ၆နာရီအချိန် သင်တန်းမစတင်မှီ ကျောင်းသို့ လာရောက်ပြီး registration counter တွင် စာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့်သင်တန်းတက်ရောက်နိုင်ကြပါသည်။
in ကမ်းလက် လပတ်လည်, ဇင်ဝေသော် - on 2/28/2015 - No comments
မေ့လျော့မနေခဲ့ဘူးဆိုလျင် ၂၈ ရက်နေ့တိုင်းမှာ ကမ်းလက် လပတ်လည် အဖြစ် အမှတ်တရစာလေးများ ရေးမိတတ်ပါသည်။ အခု ကိုပေါနဲ့ ကျွန်တော် အကြောင်းကို ရေးချင်ပါသည်။
ကိုပေါသည် လွမ်းမိုးသီချင်းထဲက ကိုပေါမဟုတ်၊ နွားကျောင်းသား မဟုတ်၊ ကျနော့် ရွာသားမဟုတ်ပါ။ သို့သော် ကျနော်လိုပဲ ထောင့်သိပ်မကျိုးသူတစ်ယောက်တော့ ဖြစ်ပါသည်။ (ဒါက ကျနော့် သတ်မှတ်ချက်သာ ဖြစ်ပါသည်)
ကိုပေါနဲ့ကျနော် နောက်ဆုံးတွေ့ဖြစ်သည်က မန္တလေး ကျုံးဘေးမှာဖြစ်သည်၊ ထိုစဉ် သူ့ဇနီးဖြစ်လာမည့် ဂျပန်မလေးလည်း ဘေးမှာရှိသည် (သူမနာမည်ကို ကျနော်မသိပါ (သို့) မမှတ်မိပါ)။ သူတို့က (ဂျပန် ဗီဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီး) အကြံ ဉာဏ်တောင်းသဖြင့် ကျနော်သိသလောက် ခပ်တည်တည်ပြောပြခဲ့ပါသေး သည်၊ သို့သော် ကျနော်ပေးသည့် အကြံဉာဏ်များက အလုပ်ဖြစ်လှမည် မဟုတ်ကြောင်း ယခု သဘောပေါက်မိသည်။ ကိုပေါနဲ့ကျနော်ကြားမှာ ဘုံ ယဉ်ကျေးမှု တော်တော်များများရှိပြီး ယခု ပြောပြချင်သည့်အချက်သည် ထို အထဲမှ တစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။ တိုတိုဆိုရလျင် ထို ဂျပန်မလေးနဲ့လက်ထပ်ပြီး ကိုပေါ ဂျပန်ကိုလိုက်သွားသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်က ကျနော့်မိတ်ဆွေတ်ယောက် (သူနဲ့ကိုပေါလည်း သိကြ၊ ရင်းနှီးကြပါသည်) ဂျပန်ရောက်သွားပြီး ကိုပေါနဲ့ တွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော့် မိတ်ဆွေစကားအရ ဇင်ဝေသော်ကိုလည်း ဂျပန်ရောက်ဖူးအောင် အလည်ခေါ်သင့်ကြောင်း သူက ကိုပေါကို အကြံပေးသည်။
"ငါက ဘာအတွက် သူ့ကို အလည်ခေါ်နေရမှာလဲ၊ သူလာချင်ရင် သူဘာသာ လာလို့ ရနေတာပဲ။ ရောက်လာလို့ ငါ့ကို ဆက်သွယ်ရင် ငါလုပ်ပေးစရာရှိတာ လုပ်ပေးမှာပေါ့" (ဤ အဓိပ္ပါယ်မျိုးရှိသည့်စကား) ဟု ပြောလိုက်သည်။
ထိုအခါ ကျနော့်မိတ်ဆွေက ကျနော့်အစား ကိုပေါအပေါ် အနည်းငယ် အောင့်သက်သက်ဖြစ်ဟန်တူပါသည်။ ဒီအတိုင်းလည်း ကျနော့် ကို ပြန်ပြောပြသည်။
သို့သော် ကျနော်ကတော့ ကိုပေါကို ပိုလေးစား၊ ပိုချစ်သွားသည်။
မန္တလေးမှာကတည်းက ကျနော်တို့ဆက်ဆံရေးက ဒီအတိုင်းပဲ ရှိနေခဲ့ကြ သည်။ အတူ ထွက်သွားလို့ အတူပြန်ဝင်လာရမယ်ဆိုတာမျိုး မရှိ။ သူ့လမ်း သူသွား။ ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်သွားဖြစ်သည်။
ကိုပေါပြောတာ မှန်ပါသည်။ တစ်ချိန်က နိုင်ငံခြားသွားဖို့ အဓိက အခက်အခဲက ဗီဇာနဲ့ ငွေဖြစ်သော်လည်း ယနေ့ ဒါတွေက သိပ်မခက်တော့ပါ။ အခု အခက် အခဲက သွားလိုစိတ်နဲ့ အချိန်သာဖြစ်ပါသည်။ ကျနော့်မိတ်ဆွေက မကျေ မနပ်ဖြင့် ပြောပြနေချိန်
"မဟုတ်ဘူးဟ၊ ဒါက ကိုပေါနဲ့ငါနဲ့ကြားက နားလည်မှု၊ ငါရောက်သွားရင် သူတတ်နိုင်တာ အကုန်လုပ်ပေးမှာ၊ ငါ့ကိုတော့ တကူးတကခေါ်နေ မယ့်ကောင် မဟုတ်ဘူး" လို့ ခပ်ပြုံးပြုံးရှင်းပြမိသည်။
အခု ကိုပေါပြောလို့သိရတာက သူ့မှာ သမီးလေးရှိသည်၊ သူမ အသက် ၁၄ နှစ်ရှိပြီ၊ သူ့သမီးလေးက သူနဲ့ ပိုတူသည် ဟုဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လျင်တော့ ကိုပေါနဲ့အတူ သူနဲ့ ပိုတူသည်ဆိုသည့် သူ့သမီးလေးရော သူ့ဇနီးကိုပါ တွေ့ချင်ပါသေးသည်။ နေရာရွေးခွင့်ရလျှင် မန္တလေးတောင်ပေါ်၊ ဗျာဒိတ်ပေး ဘုရားဘေးက အအေးဆိုင်လေး တစ်ဆိုင် ကို ရွေးချင်ပါသည်။ အချိန်ပါ ရွေးခွင့်ရလျှင် နေဝင်ရီတရောကို ရွေးပါမည်။ သို့သော် တွေ့ခွင့် မရကြတောဘူးဆိုလျင်လည်း ပြသနာတော့ မဟုတ်လှပါ။ သူတို့ဘဝ အဆင်ပြေစေဖို့ဆန္ဒ ကျနော့်ဆီမှာ ရှိနေပါသည်။ ။
- on 2/27/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Myo Byagga's video.
February 27 at 11:49pm · Edited
မိုက်တယ်ဟ။ နားထောင်ကြည့်။ စိုင်းခန်းလိတ်၊ စိုင်းထီးဆိုင် ငယ်မူငယ်သွေး။
တကယ် ရယ်သံ၊ ရှိုက်သံ အုပ်အုပ်နဲ့ သရော်၊ ဆော်ထားတာ။
Post by Myo Byagga.
ဘယ်ဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ် ပုံစံခွက်အတိုင်းရိုက်သွင်းရင် အစွန်းရောက်တွေပဲ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်
February 27 at 11:32pm ·
၂၁ ရာစုမှာ ဘယ်ဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ် ပုံစံခွက်အတိုင်းရိုက်သွင်းရင် အစွန်းရောက်တွေပဲ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဘာသာတရားဟောကြားချက်ဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးတာက လူပီသဖို့၊ လူသားဆန်ဖို့၊ လူ့အတွေးအခေါ်ရှိဖို့ပါပဲ။
အစ္စလာမ်ဘာသာမှာ သွေးချောင်းစီး နယ်စည်းများ ရှိတယ် (၂)
in Islam's Bloody Borders, ဇင်ဝေသော် - on 2/27/2015 - No comments
(Islam's Bloody Borders)
"အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ သမိုင်းတလျောက်လုံးကို ပြန်ကြည့်မိတိုင်း မွတ်စလင်ေ တွဟာ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေထိုင်ဖို့ ပြဿနာတွေ အမြဲရှိနေတတ် တယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါမယ်"
(၁၉) ရာစုတလျောက်လုံး ရုရှားတွေဟာ အာရှအလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ မွတ်စ လင်တွေကို ထိမ်းချုပ်နိုင်ဖို့ စစ်အင်အားသုံးပြီး ဖြေရှင်းလာခဲ့တယ်။ ၁၉၈၀ - ခုနှစ်တွေအတွင်းမှာ အာဖဂန်နဲ့ ရရှားတွေအကြား စစ်ပွဲကြီးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး ရုရှားတွေ တပ်ဆုတ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီနောက် တာဂျစ်ကစ္စတန်မှာ လက်ရှိအစိုးရ ကို တော်လှန်နေတဲ့ အစ္စလာမ်မစ်သူပုန်တွေအကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲတွေမှာ ရုရှားတပ်က အစိုးရကို စစ်ရေးအကူအညီတွေ ပေးခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်ပြည် ရှင်ကျန်း (Xinjiang) မှာလည်း ဝီဂါး (Uighur) နဲ့ အခြားမွတ်စ လင်တွေဟာ တရုတ်တွေနဲ့ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပြီး ဆိုဗီယက်ကနေ ခွဲထွက်လာ တဲ့ သူတို့နဲ့ လူမျိုးစုတူ၊ ဘာသာတူ အခြားလူမျိုးတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ခဲ့ ကြပါတယ်။
အိန္ဒိယကျွန်းဆွယ်မှာလည်း ပါကစ္စတန်နဲ့ အိန္ဒိယတို့အကြား သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် စစ်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက ကက်ရ်ှမီးယားအစိုးရကို အာ ခံတယ်။ နောက်မှ ဝင်ရောက်နေထိုင်လာတဲ့ မွတ်စလင်တွေက အာသံမှာ ရှိ တဲ့ ဒေသခံလူထုနဲ့ လူမျိုးစုတိုက်ပွဲ ဆင်နွဲတယ်။ အိန္ဒိယတစ်ပြည်လုံးမှာ မွတ် စလင်နဲ့ ဟိန္ဒူတွေကြားက အကြမ်းဖတ်မှုတွေဟာ မကြာမကြာ ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိတယ်။ အဲဒီပဋိပက္ခတွေကိုလည်း အိန္ဒိယထဲမှာရှိတဲ့ ဘာသာနှစ်ခုစလုံးရဲ့ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေက သွေးထိုးလှုံ့ဆော် ပေးနေခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာတော့ လူနည်းစု ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက အဆင့်အတန်း ခွဲခြားလို့ ဆိုပြီး အများစု မွတ်စလင်တွေကို ဆန္ဒပြနေကြတယ်။ တချိန်းတည်းမှာပဲ မြန်မာပြည်ထဲမှာတော့ လူနည်းစု မွတ်စလင်တွေက အများ စု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာ အဆင့်အတန်းခွဲတယ်ဆိုပြီး ဆန္ဒပြနေကြပြန်ပါ တယ်။
မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့ စီးပွားရေး လက်ဝါးကြီးအုပ်လို့ဆိုပြီး အဲဒီမှာ ရှိနေတဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေကို အများစု မွတ်စလင်တွေက အကြမ်းဖတ်မှုတွေ မကြာမကြာ ပြုလုပ်နေကြ ပြန်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလည်း ဗုဒ္ဓ ဘာသာအစိုးရကို မွတ်စလင် အကြမ်းဖတ်သမားတွေက ခွဲထွက်ရေး တောင်း ဆိုနေကြပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဖီလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းမှာ ကက်သိုလစ်ပြည်သူနဲ့ ကက်သို လစ်အစိုးရဆီက လွတ်လပ်ရေးဆိုပြီး မွတ်စလင်တွေက တောင်းဆိုနေကြပြန် ပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့ လူနည်းစု ကက်သိုလစ်ဘာသာဝင် အရှေ့တီမော လူမျိုးတွေဟာ မွတ်စလင်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာ ရုန်းကန်နေကြရပါတယ်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ ဂျူးနိုင်ငံ တည်ထောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစလို့ အာ ရပ်တွေနဲ့ ဂျူးတွေအကြား ပဋိပက္ခတွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်နေခဲ့ပြီး စစ်ပွဲလေး ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ ပါလက်စတိုင်းတွေက အစ္စရေးဥပဒေကို မလိုက်နာဘူး။ လက်ဘနွန်မှာလည်း မရွန်နိုင် (Maronite) ခရစ်ယန်တွေဟာ ရှီယစ်နဲ့ အခြားမွတ်စလင်တွေအကြားမှာ နိုင်ခြေမရှိတဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဆင်နေရတယ်။
အီသီယိုပီးယားမှာ အော်သိုဒေါက် အမ်ဟာရ (Amhara) လူမျိုးတွေက မွတ်စ လင်တွေကို ဖိနှိပ်ခဲ့လို့ဆိုပြီး အိုရိုမို (Oromo) မွတ်စလင်တွေက အီသီယို ပီး ယားနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်။
အာဖရိက တစ်တိုက်လုံးကို ခြုံကြည့်ရင် မြောက်ပိုင်းမှာ အာရပ်တွေနဲ့ မွတ်စ လင်တွေကြားမှာ ပဋိပက္ခမျိုးစုံ ဖြစ်နေခဲ့သလို တောင်ပိုင်းမှာလည်း ခရစ်ယန် လူမည်းတွေအကြား ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ သွေးထွက်သံယို အများဆုံး မွတ်စလင်နဲ့ ခရစ်ယာန်တွေကြားက စစ်ပွဲကတော့ ဆူဒန် မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲပါ။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ပြီး သေဆုံးဒဏ်ရာ ရမှုတွေကလည်း သိန်းချီ ရှိပါတယ်။
နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့ နိုင်ငံရေးကလည်း မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဖူလာနီ ဟောစာ (Fulani-Hausa) မွတ်စလင်တွေနဲ့ တောင်ပိုင်းရှိ ခရစ်ယာန် မျိုးနွယ်စုတွေ အကြား ပဋိပက္ခတွေက လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ အကြမ်းဖတ်မှု၊ တစ်ခါတစ်ခါ စစ်တပ်က ဝင်ထိန်းမှုတွေ ရှိခဲ့ပြီး စစ်ပွဲတစ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ချက် (Chad) နိုင်ငံ၊ ကင်ညာနိုင်ငံနဲ့ တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံတွေမှာလည်း အလား တူ မွတ်စလင် ခရစ်ယာန်စစ်ပွဲတွေ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
မွတ်စလင်တွေနဲ့ အခြား ကက်သိုလစ်၊ ပရိုတက်စတင့်၊ အော်သိုဒေါက်၊ ဟိန္ဒူ၊ တရုတ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ နေရာတိုင်းမှာပဲ အဆင်မပြေမှုတွေ ဖြစ်ပွားနေလေ့ ရှိပါတယ်။
အတိတ်ကို ပြန်ကြည့်ရင် အဲသလို အဆင်မပြေမှုတွေကတဆင့် အကြမ်းဖက် မှုတွေအထိ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၀ - ခုနှစ်တွေမှာ အ ကြမ်းဖက်မှုပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ သမိုင်းတလျောက်လုံးကို ပြန်ကြည့်မိတိုင်း မွတ်စလင်ေ တွဟာ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေထိုင်ဖို့ ပြဿနာတွေ အမြဲရှိနေတတ် တယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါမယ်။
ဒီမှာ စောဒကတက်လာနိုင်တာက အခု မွတ်စလင်နဲ့ မွတ်စလင် မဟုတ်သူတွေကြားမှာ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားနေသလို အခြား စီဗီလိုက်ဇေး ရှင်းတွေ ကြားမှာလည်း ဖြစ်နေတာပဲဆိုတဲ့ အယူအဆပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီစောဒက,က မမှန်ပါဘူး။ မွတ်စလင်တွေဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ငါးပုံတစ်ပုံပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၉၀ - ခုတွေအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေထဲမှာ မွတ်စလင် စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းက အခြား စီဗီလိုက်ဇေးရှင်းက လူတွေထက် အများကြီး ပိုလွန်နေပါတယ်။
Labels: Islam's Bloody Borders, ဇင်ဝေသော်
in ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 2/27/2015 - No comments
အရင် သီဟိုဠ်ဆရာတော်ကြီးလက်ထက်က ပန်းကန်ခွက်ယောက် အဟောင်းတွေေ ကျာင်းမှာရှိတယ်။ လိုအပ်တဲ့အခါ သုံးဖို့ဆိုပြီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မပေးရက်ကြတာ။ တန်ဖိုးလည်း မကြီးလှဘူး။ အဓိက, က အစွဲပါ။
ဒါနဲ့ "လိုအပ်တဲ့အခါ" ဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။ "ဘယ်အချိန် လို အပ်လောက်သလဲ၊ ငါနေခဲ့သမျှ ၁၂ နှစ်တာ ကာလမှာတော့ တစ်ခါမှ ဒါတွေ မလိုခဲ့ဘူးဘူး။ ပွဲအကြီးဆုံး နှစ် ၅၀ ပြည့် ပွဲမှာတောင် မသုံးလိုက်ရဘူးဆိုတော့ ဒီထက်ကြီးတဲ့ပွဲ ရှိဦးမှာလား။ နှစ် တစ်ရာပြည့်အထိ ဆက်ထားကြမှာ လား" ပေါ့။
ဒီတော့မှ ကော်မတီတစ်ဖွဲ့လုံး ဝါး ကနဲ ရယ်ကြတယ်။ ပန်းကန်ခွက်ယောက် အဟောင်းတွေကိုလည်း အခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကို ပေးလိုက်ကြတယ်။ (ဒါတောင် တချို့ကို "လိုအပ်တဲ့အခါ" ဆိုပြီး ချန်ထားကြသေးတယ်။ ဖြစ်ရပုံ)။ ဒါက စင်္ကာပူမှာ။
ပြောချင်တာက အလုပ်မဖြစ်တဲ့ အစဉ်အလာတွေကိုလည်း အဲသလိုပဲ ပျောက် မှာစိုးလို့ ထိန်းတတ်ကြတယ် ဆိုတာပါ။ မပျောက်ဘဲ ရှိနေတော့လည်း သုံးကြ တာတော့မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီနိုင်ငံဟာ ဥပါဒါန်လေးပါး အကြောင်းလည်း အပြောဆုံး၊ အဟောဆုံး။ လူတွေရော၊ ဘုန်းကြီးတွေရော။
ရှေးဟောင်းမင်္ဂလာများနဲ့ ခေတ်သစ် လူမှုဒိုင်မင်းရှင်း (၂)
in ရှေးဟောင်းမင်္ဂလာတရားနှင့် ခေတ်သစ်ဆိုရှယ်ဒိုင်မင်းရှင်း - on 2/27/2015 - No comments
ဆရာတပည့် ဆက်ဆံရေး ပြောင်းလဲလာရင် သူတို့ကြားက တာဝန်နဲ့ ၀တ္တရားတွေဟာလည်း မလွဲမသွေ ပြောင်းသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လင်မယား ပြိုင်တူ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ခေတ်၊ အမျိုးသားရဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီး၊ ဘရက်ဝင်းနား (Bread winner) ရာထူးလျောကျလာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ “တစ်လမ်းသွား လင်၊ မယားကျင့်ဝတ်တွေဟာ" လည်း အလျားအနံ သင့်လှတော့မယ်မဟုတ်ပါ။ ဇနီးဖြစ်သူကြိုးစားလိုက်နာသည်ဆိုစေ တရား မျှတဟန် မတူတော့ပါ။
ရှေးယခင်က သခင်နဲ့ ကျေးကျွန်၊ ယနေ့ခေတ်မှာ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမား၊ လူတန်းစား ကွဲပြားမှု အရမှန်ပေမယ့် သူတို့ကြားက ဆက်ဆံရေးကတော့ လုံးဝခြားနားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၉) ရာစု ဗြိတိသျှတွေရဲ့ ကျွန်စနစ် စတင် ဖျက် သိမ်းချိန်အထိ ကမ္ဘာဟာ ကျေးကျွန်စနစ်နဲ့ လက်ပွန်းတတီး ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ချိန်က အရှင်သခင်အတွက် ဘာမဆို၊ ဘယ်လိုပဲ ဆုံးဖြတ် ဆုံးဖြတ် မှန် ကန်ပေမယ့် ဒီနေ့အလုပ်ရှင်ဟာ အစိုးရ ဥပဒေ၊ NGO ဥပဒေတွေကြားမှာ ထင်ရာစိုင်းခွင့် မရှိတော့ပါဘူး၊ ဒါတွေက ဥပမာအရသာ ဆွေးနွေးတာ ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား အသီးသီးကြားက ဆက်ဆံရေး ပုံစံဟာ ကွဲပြားလာနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တာဝန်နဲ့ ၀တ္တရားပုံစံတွေလည်း ကွဲပြားလာနေပါတယ်။ "အိပ်သော် ကား နောက်၊ ထသော်ကားရှေ့" တွေ အံမဝင်တော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် သိင်္ဂါလောဝါဒသုတ်လိုဒေသနာဟာ အပိတ်ဒေသနာလို့ အကြမ်း ကောက်ချက်ချ နိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီမှာ မေးခွန်း နှစ်ခုတက်လာပါတယ်။
၁။ ဘာသာရေးပုံစံခွက်အတိုင်း ဘ၀ကို ပုံဖော်ကြမှာလား?
၂။ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဘဝထဲကို ဘာသာရေးတန်ဖိုးတွေ ထည့်သွင်း ကျင့်သုံး ကြမှာလား?
ဘာသာရေးပုံစံခွက်အတိုင်း ဘ၀ကို ပုံဖော်မယ်ဆိုရင် သတိထားစရာ အကောင်းဆုံးအချက်က အစ္စလာမ်စာအုပ်ကြီးဝါဒ (Extreme Islamic Fundamentalism) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်နဲ့ အံမ၀င်တော့ ဘူးဆိုတဲ့ အချက်ကို လက်မခံဘဲ (၁၇) ရာစု တန်ဖိုးတွေကို (၂၁) ရာစုက လူတွေပါ လက်ခံဖို့ ကြိုး စားရင်း သူတို့ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အမြင်မှာ အစွန်းရောက်သူတွေ ဖြစ်သွား ခဲ့ရပါတော့တယ်။
နံပါတ်နှစ်ဖြစ်တဲ့ (ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဘဝထဲကို ဘာသာရေးတန်ဖိုးတွေ ထည့် သွင်း ကျင့်သုံးခြင်းဟာ) ပိုပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိသလို နှစ်လိုဖွယ်ရာလည်း ကောင်း ပါတယ်။
(သိင်္ဂါလောဝါဒသုတ်လာ ၀တ္တရားတွေဟာ ဒီနေ့ လူမှု ဆက်ဆံရေးမှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ရှိနေရမယ်လို့ ဆိုသူတွေလည်း ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကို အတိုက်အခံ မလုပ်လိုပါ။ ဘာမှလည်း မတုန့်ပြန်လိုပါ။ )
ဒီတန်ဖိုးတွေ ခေတ်မမီတော့လို့ ၀မ်းနည်းစရာလား?
မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ခေတ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့ အဆုံးအမ၊ ယဉ်ကျေးမှုကို အခြေခံတဲ့ အဆုံး အမတွေဟာ ခေတ်ပြောင်း ယဉ်ကျေးမှုပြောင်းရင် အံ မ၀င် ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ သိင်္ဂါလောဝါဒသုတ်ဟာ သဘာဝဓမ္မကို အခြေ မခံပါ။ လူမှုဆက်ဆံရေးကို အခြေခံပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူမှုဆက်ဆံရေး ပုံစံ ပြောင်း သွားတာနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲသွားပါတယ်။ ဒါတွေကို ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်အနေနဲ့ တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတန်ဖိုးတွေနဲ့ အညီဖြစ်မှ ဘ၀ဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိမယ်၊ မျိုးဆက်သစ် တွေကို ဒီ တန်ဖိုးတွေနဲ့ပဲ တိုင်းတာသတ်မှတ် ပုံဖော်မယ်ဆိုရင်တော့ ခေတ်ရေစီးနဲ့ ကြည့်ရင် အတန်ငယ် နောက်ကျနေခဲ့ပြီလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ အံမ၀င်တာကို အတင်းကြီး ဇွတ်သွင်း အံဝင်ဖို့ ကြိုးစားခြင်းဟာ အနည်းငယ် အကျည်းတန် ပါတယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ခြုံကြည့်ရင် ဒီတန်ဖိုး နှစ်ခုဟာ အဓိက ကြောရိုးနှစ် ခု ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ နှစ်ခုဟာ မတူပါဘူး။ လုံးဝမတူတာလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တူတဲ့နေရာတွေ ရှိသလို မတူတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ သိပ္ပံက အချက် အလက် (Fact) အပေါ်မှာ အခြေပြုပြီး ကိုးကွယ်မှုက ယုံကြည်မှု (Belief) ပေါ်မှာ အခြေပြုပါတယ်။ ထာဝရဘုရားရှင်မရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သိပ္ပံ ပညာတွေ့ရှိချက်ဟာ မမှိတ်မသုန် ယုံကြည်တဲ့ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို မလှုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး ။ (အနည်းဆုံး ဒီနေ့အထိ ဘာမှ မဖြစ်သေးပါဘူး။) စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာ တစ်ခုက သိပ္ပံပညာက တစ်ခုခုကို တွေ့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဘာသာရေးပညာရှင်တွေက သူတို့ ဘာသာရေး အဆုံးအမထဲမှာ ဒါတွေရှိပြီးသား၊ သူတို့ဘာသာဟာ သိပ္ပံနဲ့ ညီတယ် ဆိုတာတွေ ရေးကြပြောကြတတ်ပါတယ်။
ဥပမာ နယူတန်ရဲ့ ကမ္ဘာမြေဆွဲအားကို ကမ္ဘာက အသိအမှတ် ပြုခဲ့ရတဲ့နောက် လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲက သက်ရှိသက်မဲ့အရာတွေအားလုံးဟာ တိုင်ကပ် နာရီ ကြီးရဲ့ အစိတ်အပိုင်း လေးတွေလိုပဲဖြစ်တယ်လို့ ယူဆလာကြပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဒီအယူအဆတွေဟာ မိမိတို့ဘာသာနဲ့ တစ်ထပ်တည်း ကျတယ် လို့ ပြောဆိုရေးသားမှုတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေ အများကြီးပါ။ တကယ်တော့ မတူတာကို အတင်းဆွဲညှိနေခြင်း အားဖြင့် တန်ဖိုး တက်မလာ တဲ့ အပြင် တန်ဖိုးတောင်ကျနိုင်ပါတယ်။
Labels: ရှေးဟောင်းမင်္ဂလာတရားနှင့် ခေတ်သစ်ဆိုရှယ်ဒိုင်မင်းရှင်း
ဒါက အတုလား၊ အစစ်လား ဟ
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 2/26/2015 - No comments
ဒါက အတုလား၊ အစစ်လား ဟ။
မလုပ် မလုပ်နဲ့၊ လုပ်မယ်လုပ်တော့လည်း
ဖိအားမပေးဘဲ ဝင်လုပ်တာဆိုရင်တော့ နပသ က ထိုင်မနေဘဲ ထသွားလိုက်တာမျိုးပဲ။
ဝမ်းနည်းစရာ။ တချို့ကို ပြန်လည်စီစစ်ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်။
ကမ်းလက် shared Maha Thumana's photo.
အစ္စလာမ်ဘာသာမှာ သွေးချောင်းစီး နယ်စည်းများ ရှိတယ်
in Islam's Bloody Borders - on 2/26/2015 - No comments
"မွတ်စလင်တွေရဲ့ စစ်မက်လိုလားမှုနဲ့ အကြမ်းဖတ်မှုတွေဟာ (၂၀) ရာစုနှောင်း ပိုင်း ပဋိပက္ခတွေရဲ့ သက်သေခံ အချက်အလက်တွေဖြစ်တယ် ဆိုတာ မွတ် စလင်တွေရော မွတ်စလင်မဟုတ်သူတွေပါ ဘယ်သူမှ ငြင်းဆန် လို့ မရနိုင်ပါ ဘူး"
အုပ်စုများအကြားဖြစ်ပွားတဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ နယ်မြေအငြင်းပွားမှုစစ်ပွဲတွေဟာ သမိုင်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုပါ။ အရေအတွက်နဲ့ ပြောရရင် စစ်အေးကာလ အတွင်းမှာ လူမျိုးစုပဋိပက္ခစစ်ပွဲပေါင်း (၃၂) ပွဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ အာရပ် အစ္စရေး နယ်မြေအငြင်းပွဲမှုတိုက်ပွဲ၊ အိန္ဒိယနဲ့ ပါကစ္စတန်၊ ဆူဒန်က မွတ်စလင် နဲ့ မွတ်စလင်မဟုတ်သူများ၊ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ တမီးလ်များ၊ လက်ဘနွန်က ရှီယိုက်စ်နဲ့ မရွန်နိုက် မွတ်စလင်တွေအကြား ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
၁၉၄၀ နဲ့ ၁၉၅၀ - ခုနှစ်တွေအကြား ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေရဲ့ တစ် ဝက်ကျော်ကျော်ဟာ အိုင်ဒင်တတီ (ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသား) နဲ့ ပတ်သက်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်း စစ်တွေရဲ့ လေးပုံသုံးပုံဟာ လူမျိုးစုအချင်းချင်း ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်လုရာက ဖြစ် လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ၁၉၅၀ နဲ့ ၁၉၈၀ - ခုတွေကြားမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲအရေ အတွက်က သုံးဆတောင် ပိုများသွားခဲပါတယ်။ ပါဝါလုမှုကြားမှာ အဲသလောက် များပြားတဲ့ စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့တာကိုပဲ (ပညာရှင်အချို့က) အာရုံ သိပ်မစိုက်ခဲ့ကြပါဘူး။ စစ်အေးကာလအပြီး သုံးရောင်စုံ ကွဲပြားသွားမှုရဲ့ ရလဒ်လို့ မှတ်ယူခဲ့ကြတယ်။
စစ်အေးတိုက်ပွဲကြီး အပြီးမှာတော့ အုပ်စုတွင်း ဖြစ်ပွားတဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ပိုများ လာပါတယ်။ ဒီလောက် ကာလအတွင်းမှာ အဲသလောက်များများ စစ်ပွဲေ တွ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သမိုင်းမှာ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။
လူမျိုးစုပဋိပက္ခတွေ၊ နယ်မြေအငြင်းပွားမှု စစ်ပွဲတွေကို ကမ္ဘာ့ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်း ကြီး အားလုံးက အညီအမျှ မွေးထုတ်ပေးလိုက်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိက မြေလုတိုက်ပွဲကြီးတွေဟာ ယခင် ယူဂိုစလားဗီးယားက ခွဲထွက်သွား တဲ့ ဆာ့ဗ်တွေနဲ့ ခရုတ် (ခရိုအေးရှား) အကြား၊ သီရိလင်္ကာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ တမီးလ်လူမျိုးတွေအကြားမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲတွေပါ။ အဲဒါတွေလောက် အကြမ်းဖက်မှု မများတဲ့ မွတ်စလင် မဟုတ်သူတွေကြားမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေလည်း နေရာတချို့မှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ယူရှေးရှား (ဥရောပ၊ အာရှ) ကနေ အာဖရိကအထိ နယ်မြေ အငြင်းပွား မှု အခြေခံ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အထင်ကရ ပဋိပက္ခတွေကတော့ မွတ်စလင်တွေနဲ့ မွတ် စလင်မဟုတ်သူတွေကြားမှာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး အမြင်အရ တစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီဗီလိုက်ဇေးရှင်း ပဋိပက္ခဟာ အနောက်နဲ့ အနောက်မဟုတ် သူတွေကြားမှာ (West and the rest) ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းအဆင့်မှာတော့ ပဋိပက္ခတွေဟာ အစ္စလာမ်နဲ့ အစ္စလာမ် မဟုတ်သူတွေကြားမှာ ဖြစ်နေပါတော့ တယ်။ မွတ်စလင်နဲ့ မွတ်စလင် မဟုတ်သူတွေကြားက မုန်းတီးမှု၊ အကြမ်းဖက် မှုတွေဟာ ပြင်းထန်လှသလို နေရာအနှံ့အပြားမှာလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဘော့ စနီးယားမှာဆိုရင် မွတ်စလင်တွေဟာ အော်သိုဒေါက်(က်) ဆဗ်လူမျိုးတွေ နဲ့ သွေးချောင်းစီးစစ်ပွဲ တိုက်ခဲ့ကြပြီး ကက်သိုလစ် ခရိုအေးရှားလူမျိုးတွေနဲ့ ရန်မီး ထပ်ပွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ကိုဆိုဗိုမှာဆိုရင်လည်း အယ်လ်ဘေးနီးယား မွတ်စလင်တွေဟာ ဆဗ်အစိုးရကို မကျေနပ်လို့ စင်ပြိုင်မြေအောက်အစိုးရ ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအုပ်စုနှစ်ခုကြားမှာ ဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့ အကြမ်းဖတ်မှုတွေဟာ မနည်းမနော ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အယ်လ်ဘေးနီးယား အစိုးရနဲ့ ဂရိအစိုးရတွေကြားမှာလည်း နှစ်နိုင်ငံအတွင်း မှာ ရှိနေတဲ့ သူတို လူနည်းစုလေးတွေ့ရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အမြဲ တမ်း တကျက်ကျက် ဖြစ်နေတယ်။ တူရကီနဲ့ ဂရိတွေကလည်း သမိုင်း တလျောက်လုံး ဦးသူဆော်မယ် တကဲကဲပါပဲ။ ဆိုက်ပရပ်မှာ ကြည့်ပြန်တော့ တူရကီမွတ်စလင်တွေနဲ့ ဂရိ အော်သိုဒေါက်တွေရဲ့ ရန်လိုအမုန်းထားမှုက အမျှင်တန်းလို့ နေပါတယ်။ ကော်ကေးဆပ်ဘက်ကို ကြည့်တော့ တူရကီတွေနဲ့ အာမေးနီးယန်းတွေကြားမှာလည်း နဂါနို ကရာဘက် (Nagorno Karabakh) ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။
ကော့ကေးဆပ် မြောက်ပိုင်းမှာတော့ ရုရှားပြည်ထဲကနေ လွတ်လပ်ရေး ရဖို့ ဆိုပြီး ချေချင်း (Chechens) တွေ၊ အန်ဂုရှ် (Ingush) တွေနဲ့ အခြား မွတ်စလင်တွေ တိုက်ပွဲဆင်နေခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်းနှစ်ရာလောက် ကြာနေခဲ့ ပါပြီ။ သွေးထွက်သံယိုမှု အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲကတော့ ၁၉၉၄ - ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရုရှားနဲ့ ချေချင်းတို့အကြားက စစ်ပွဲပါ။ အန်ဂုရ်ှမွတ်စလင်တွေနဲ့ အော်သိုဒေါက် အာ့စက်ရှန်း (Ossetian) တွေကြား မှာလည်း စစ်ပွဲက ဖြစ်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဗော်လဂါမြစ်ဝှမ်းမှာလည်း တာတာ မွတ်စလင်တွေဟာ ၁၉၉၀ နှစ်ဦးပိုင်းတွေ ကတည်းကစလို့ ရုရှားတွေနဲ့ တိုက် ခိုက်လာခဲ့ကြပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ရုရှားနဲ့ စိတ်မပါ့တပါ သဘောတူညီမှု ရယူ ခဲ့ကြပါတယ်။
Labels: Islam's Bloody Borders
in The Clash of Civilizations - on 2/25/2015 - No comments
မနက်ဖြန်မှာ မြန်မာမွတ်စလင်တွေအပေါ် စောင့်စည်းမှုအနေနဲ့ မတင်ဘဲ ထားခဲ့တဲ့ "Islam's Bloody Borders" ကို တင်ပေးပါမယ်။ အစ္စလာမ်ကို အဆိုးမြင်နဲ့ ကြည့်တာမဟုတ်ဘဲ ယထာဘူတအမြင်နဲ့ ကြည့်ကြရင် မွတ်စလင်အများစုတွေအပေါ် နားလည်နိုင်သလို ပစ္စက္ခအနေအထားကိုလည်း အထိုက်အလျောက် ရိပ်စားမိနိုင်မှာပါ။
နောက်ပြီး ဒီဆောင်းပါးကြောင့် ပွက်လောရိုက်သွားလို့ "The Clash of Civilizations" ကို ကောက်ရေးလိုက်တာလို့ ဟန်တင်တန်က ဝန်ခံထားပါတယ်။
အဲဒီ စာအုပ်က မဖြစ်မနေ ဖတ်ရ၊ ကိုးကားနေရတဲ့ တက်စ်ဘုတ်ပဲ
လီကွမ်းယုစာအုပ်အတွက် အစအဆုံး အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ မစ္စတာ လီ (Dr.Lee Chuan Guan) ရဲ့သမီးက နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကို လေ့လာနေသူပါ။ ဒါနဲ့ သူ့ကို "The Clash of Civilizations" ကို သိသလားဆိုတော့ "ပေါ်လစ်တီကယ် ဆိုင်းယင့်စ်ကျောင်းသားက မသိလို့ ဘယ်ရမလဲ။ အဲဒီ စာအုပ်က မဖြစ်မနေ ဖတ်ရ၊ ကိုးကားနေရတဲ့ တက်စ်ဘုတ်ပဲ၊ သမီးတို့ တက္ကသိုလ်ရယ်မှ မဟုတ်ဘူး၊ ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်တိုင်းလိုလိုမှာ အဲဒီစာအုပ်က တ
ပြောချင်တာက ဒီစာအုပ် ဒုတိယတွဲကို ပရင့်ထုတ်၊ ပရုဗ်ဖတ်နေတယ်တို့ ဘာတို့ပေါ့လေ။
in Ven Cittara - on 2/24/2015 - No comments
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနဲ့ ဆိုရှယ်အက်သစ်ဆိုပြီး လေ့လာမှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆိုရှယ် လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ သမာဓိမဂ္ဂင်၊ ပညာမဂ္ဂင်တွေက သိပ်မဆိုင်လှတော့ ပါဘူး။ အချင်းချင်း ဆက်ဆံရေးနဲ့ အဓိက သက်ဆိုင်တာက သီလမဂ္ဂင်တွေဖြစ်သွား ပါတော့တယ်။
မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိကို Truth (မှန်ကန်),
reliable (လက်ခံနိုင်ဖွယ်) ,
trust worthy (ယုံကြည်ထိုက်).
Rejoice in unity (ညီညွတ်မှုကို လိုလားခြင်း)
delight in unity (ညီညွတ်မှုမှာ ပျော်မွေ့ခြင်း)
speaks words that promote unity (ညီညွတ်ရေးကို အလေးထား ပြော ဆိုမှု) ဆိုတဲ့ ပါဠိတော်လာ သမဂ္ဂရတာ စတဲ့ စကားတွေနဲ့ ဆွေးနွေးကြပါတယ်။
နူးညံ့သိမ်မွေ့ ( Nela),
နားချမ်းသာ (kanna sukha)
စိတ်နှလုံးကို ဆွဲဆောင်နိုင် (Hadayangama)
ယဉ်ကျေး (pori) စတာတွေနဲ့ ဆွေးနွေးကြပါတယ်။
Speaks at the proper time(Kala vadi) ပြောချိန်မှန်
speaks the truth(Bhutavadi) အမှန်ပြော
profitable အကျိုးရှိရှိပြော လို့ ဆွေးနွေးကြပါတယ်။
သမ္မာကမ္မန္တကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ဒီနေ့ပြောနေကြတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေပါ။
သူ့အသက်မသတ်ရ ဆိုတာက လွတ်လပ်စွာ ရှင်သန်ခွင့် (The right to live)
မခိုးရ ဆိုတာက တရားသဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့် (Property right)
ကာမေသု ရှောင်ဆိုတာက လူမှူဆက်ဆံရေး ထိမ်းသိမ်းမှု (The right of relationship) ပါ။
သမ္မာ အာဇီဝကို တစ်ခွန်းတည်းနဲ့တောင် ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ အသက်မွေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ (တနည်း) စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးစကား (Mutual interests) ပါ။ မြန်မာလို ကုသိုလ်ရ၊ ဝမ်းဝ၊
ခေတ်စကားနဲ့ နှစ်ဖက်အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှုခြင်းမျိုးပါ။
in ဘာသာရေးသတင်း - on 2/24/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared မင်္ဂလာမောင်မယ်အသင်း's photo.
February 24 at 11:37am ·
ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင် အပေါင်းတို့ ခင်ဗျား
ထို့ ကြောင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်များအနေဖြင့် ဗုဒ္ဓ၏ အဘိဓမ္မာ ဒေသနာတော်များကို သင်တန်းတက်ရောက် သင်ယူနိုင်ကြစေရန် အောက်ပါလင့်ခ်တွင် စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါကြောင်း တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
Faces နဲ့ ဇင်ဝေသော်
- on 2/24/2015 - No comments
Faces မဂ္ဂဇင်းနဲ့ ရေစက်ပြန်ဆုံခွင့်ရသည့်အတွက် ကျေနပ်ကြည်နူး ခံစားရ ပါသည်။ ဇင်ဝေသော်ကလောင်လေးကို ပထမဆုံး စတင်ဖော်ပြပေးသော မဂ္ဂဇင်းကြီးဖြစ်သဖြင့် Faces ကို ကျေးဇူးလည်း အထူးတင်မိသည်။ ထိုစဉ် အယ်ဒီတာချုပ်က ဒေါ်တူးတူးမြင့်သိန်းဖြစ်ပြီး သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ဝန်းကျင်ကဟု ထင်ပါသည်။
Faces မဂ္ဂဇင်းရဲ့ "ဧည့်ခန်းဆောင်များကို ဖြတ်သန်းခြင်း" အခန်းမှာ "ကျနော် ဧည့်သည်၊ ကျနော့် ဧည့်သည်" ဆောင်းပါးလေးပို့ရင်း ရင်တထိထိတ်နဲ့ ပါ မပါ စောင့်စား ရင်ဖိုခဲ့ရသည့် ရဟန်းငယ်ဘဝကိုလည်း အမှတ်တရ ဖြစ်စေ သည်။ နာဂတောင်းပေါ်ကအဆင်း ရန်ကုန်ကို မလယ်မဝယ်တက်လာရင်း စာလည်းရေးချင်၊ စာမူခလည်းရချင်သဖြင့် Faces မှာ ကံစမ်း၊ လက်စမ်းခဲ့မိ သည်။ ထိုခေတ်က စာမူတစ်ပုဒ်ကို Faces က နှစ် ထောင်လား၊ သုံးထောင် လား ပေးသည်၊ တိတိကျကျ မမှတ်မိသော်လည်း စောနေလတ်ကလောင်နဲရေး တဲ့ အခြားမဂ္ဂဇင်းတွေထက် Faces က ပိုပေးတာ သေချာပါသည်။
ခေါက်ရိုးမကျိုးလှသော ရဟန်းတစ်းပါးအနေနဲ့ ဒကာ ဒကာမဆက်ဆံရေး ထက် စာရေးပြီး ပစ္စည်းလေးပါးရှာဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို "ကျနော် ဧည့်သည်၊ ကျနော့် ဧည့်သည်" ဆောင်းပါးလေး ပါလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဇင်ဝေသော် ရဲ့လက်ကို ဒေါ်တူးတူးမြင့်သိန်းက ယုံကြည်သွားဟန်တူပါသည်၊ ကျွန်တော်နှင့် ငွေရောင်အနားကွတ်ပိုင်ရှင်များ" အခန်းဆက် ဆောင်းပါးတွေ ဆက်ရေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဇင်ဝေသော်လည်း ပြည်နှင်ဒဏ်မဟုတ်ပေမဲ့ မြို့တော်မှ ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး ခြင်္သေ့ရည်နို့ သောက်စို့ခဲ့ရသည်။
စင်္ကာပူရောက်ပြီးသည့်နောက် ဒေါ်တူးတူးမြင့်သိန်းနဲ့ ဒီမှာတွေ့ပြီး စာဆက်ရေးဖို့ သူမက အားပေးခဲ့တာကို သတိရမိသည်။ ရေးတော့ မရေးဖြစ်တော့ပါ။
အခု Faces မှာ ဦးမြင့်သူ (မြေလတ် မောင်မြင့်သူ) ရောက်နေသည်။ Faces ကို သူကိုင်နေသည်။ သံယောဇဉ် မပျယ်၊ ကျေးဇူးတရား အမှတ်ရနေဆဲမို့ Faces ဆိုလိုက်တာနဲ့ "ကြိုက်ရင်း သုံးပေါ့ဆရာရယ်" ဆိုပြီး ဘာသာရေး အနံ့ဖြူးတဲ့ လူမှုဒိုင်မင်းရှင်းကို ပြန်စနေမိပါတော့သည်။
ဇင်ဝေသော်ရဲ့ ပထမဆုံး မိတ်ဆွေ၊ ကျေးဇူးရှင်က Faces ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်တူးတူးမြင့်သိန်း၊ ဆရာ မောင်ကျော်သာ (ပဲခူး)၊ ဆရာ ဦးမြင့်သူ (မြေလတ် မောင်မြင့်သူ)နဲ့ Faces မိသားစုအားလုံးကို ဖေ့စ်ဘုတ်ကနေ ပဲ ကျေးဇူးစကား ဆိုလိုက်ရပါသည်။
ပြည်က လူကတုံးကိစ္စကို တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ခံနေလို့ မသိလိုက်ပါဘူးဗျို့။
သိတဲ့လူက ရှယ်ကြပါအုံး။ မသိယောင်ဆောင် မေးခြင်းမဟုတ်ကြောင်း မူအားဖြင့် ပြန်ကြားလိုပါသည်။
ရဲဘော်ကြီး ဝတ်မှုံ သို့
- on 2/23/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared အောင်ဆန်း ရာပြည့်'s video.
February 23 at 10:19pm ·
Post by အောင်ဆန်း ရာပြည့်.
အမှတ်ပေးဒိုင် သုံးယောက်စလုံး (သစ္စာနီ၊ ဓမ္မဂင်္ဂါ၊ ဇင်ဝေသော်) ပ၊ ဒု လွန်ဆွဲစရာမလိုခဲ့တဲ့ ကလေးပါပဲ။
ဘယ်လို ဆိုးနွဲ့ပါစေ။ သူ့ကို သည်းခံစောင့်ရှောက်ပေးကြပါ။
အန်ပေါင်းက ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့
အာရောဂျပရမာ လာဘာ လို့သာ ဘုရားဟောပြီး အန်ပေါင်း ပရမာ လာဘာ လို့ မဟောခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ လက်ပေါ် ကြွေကျလာတဲ့ သစ်သီးကိုသာ စားတော့အံ့ ဆိုပြီး အပြင်မထွက်ဖြစ်တော့ပါ။
in ဇင်ဝေသော်, ဆောင်းပါး - on 2/23/2015 - No comments
ဒါကတော့ ဆော့ဖ်ကော်ပီရှိနေတယ်။ ဖတ်ကြပေတော့။
စာပေကလာတဲ့ ရန်သူငါးမျိုး “ငါးပါး” ဆိုတဲ့ စကားမှာ “ငါးပါး” ဆိုတာကတော့ လူတိုင်း သိပြီးသားပါ။ ဒါကိုပဲ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာ ပါ။ နောက်ပြီး ဘယ်ရန်သူက လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်ပြီး ဘယ်ရန် သူက လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးကိုပဲ ထိခိုက်စေတာလဲ ဆိုတာကို ပါ သုံးသပ် ကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဒီသုံးသပ်မှုကို အခြေခံပြီး ဘယ်ရန်သူက ဘယ် ရန်သူလောက် မဆိုးဘူးဆိုတဲ့ အဖြေကိုလည်း ထုတ်ကြည့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုတုန်းကတော့ “ရေ” ရန်သူဆိုတာ မြစ်ရေ၊ ချောင်းရေ၊ မိုးရေကြီးမှု၊ ဒီရေကြီး မှုကြောင့် အသက်တွေ ပေးဆပ်ရ၊ ကောက်ပဲသီးနှံတွေ မျောပါရ စတဲ့ အကျိုး ဆက်တွေ ခံစားကြရ ဆိုတာတွေ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက် ရေအန္တရာယ်က ရေပြတ်လပ်မှုပါ။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အရင်က ရင်ဆိုင် ခဲ့ရတာက မိုးခေါင်မှု၊ အစာရေစာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု စတဲ့ ဘေးဒုက္ခတွေ ကို ပေးပါတယ်။
ဒီနေ့ခေတ် သတ်မှတ်ချက်ထဲမှာတော့ ပင်လယ်ရေ မြင့်တက်လာမှုတွေ၊ နာ ဂစ်၊ ကတ်ထရီနာ၊ စူနာမီတွေပါ ထည့်သွင်းမှ ပြည့်စုံပါတော့မယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့ ခန့်မှန်းခြေနဲ့ဆိုရင် မြေအောက်ရေ ရှားပါးလာမှု၊ ပြတ်လပ်မှုတွေတောင် ရင်ဆိုင်နေရ၊ ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ “ရေဘေး” ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင့်ငါးရာကျော်က ရေဘေးဆိုတာ ထက် အများကြီး ကျယ်ပြန့်လာနေပါတယ်။
ဒါဖြင့် ဒီရေဘေးက ဘယ်သူတွေကို ထိခိုက်နိုင်သလဲ။
ပင်လယ်ပြင် မြင့်တက်လာမှု၊ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်လာမှုတွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားရင် ဒီဘေးဟာ ကမ္ဘာနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဘေးကြီးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ရှေးဟောင်း သတ်မှတ်ချက်အရ မြစ်ရေ၊ ချောင်းရေ ကြီးမှု၊ မိုးခေါင်၊ ကန်ရေ တွင်းရေတွေ ပြတ်လပ်၊ ခန်းခြောက်မှုကိုပဲ ကြည့်ရင်တော့ တစ်ကမ္ဘာလုံး မဆိုထားနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကိုတောင် တိုက်ရိုက် မထိခိုက်ပါဘူး။ ဥပမာ နာဂစ်ဆိုရင်တောင် ပင်လယ်ရေ ဒုက္ခပေးသွားတာက ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့ အခြား နီးစပ်ရာ ဒေသတွေကိုပါ။ တစ်နိုင်ငံလုံး အနေအထား မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ရေဘေးရဲ့ ဒုက္ခပေးရာ အကျယ်အဝန်းက နှစ်မျိုး ဖြစ်သွားပါတယ်။ (တစ်) ရေဘေးဟာ ဂလိုဘယ်ရန်သူ၊ (နှစ်) ရေဘေးဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရဲ့ ရန်သူဆိုတာကို မူတည်ပြီး ရေဘေးရဲ့ နယ်ပယ်လည်း ကွဲပြားသွားပါတော့တယ်။
ဒါက ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိသလဲ?
အလွန်ရှည်လျားတဲ့ အဖြေဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ခေတ်သစ် သတ်မှတ်ချက် အရတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု၊ လေထု၊ ရေထု ညစ်ညမ်းမှု၊ အိုဇုန်းလွှာ ပေါက်ပြဲမှု စတာတွေ ဖြစ်ပြီး အကူအညီပေးနိုင်တဲ့နည်းကတော့ ကမ္ဘာမြေကို တက်နိုင်သမျှ ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ကြဖို့ပါပဲ။
ရေကြီး ရေလျှံမှု၊ မိုးခေါင်၊ ကန်ရေတွင်း ရေပြတ်လပ်မှုကတော့ ကမ္ဘာလုံး အဆင့် မဟုတ်ပါဘူး။ နာဂစ်လို ဘေးရန်ကို သဘာဝဘေးဒဏ်လို့ သတ်မှတ် ရင် ရနိုင်ပေမဲ့ ရေကြီး၊ ရေလျှံ၊ ရေပြတ်လပ် ကိစ္စတွေကတော့ အစိုးရ၊ လူထုနဲ့ ပါ ဆိုင်ပါတယ်။ မိုးရွာတာက သဘာဝကြောင့် ဖြစ်ပေမဲ့ ရွာထားတဲ့ရေတွေ ဘယ်မှမစီးဘဲ ဗွတ်ထနေတာကတော့ သဘာဝနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ လူထုကိုပါ ဆွဲထည့်ထားရပေမဲ့ အဓိက တာဝန်ပျက်ကွက်ခဲ့တာကတော့ ရာစုဝက်ကျော်ေ ကျာ်က အဆက် ဆက်သော အစိုးရတွေ (သူတို့ကလည်း ရန်သူစာရင်ထဲ ပါနေတယ်) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မီးရန်သူကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ရှေးခေတ်က သတ်မှတ်မှုအရ တောမီး၊ မြို့မီးလောင်မှုတွေပါပဲ။ ဒီမီးကြောင့် ထိခိုက်တဲ့ နယ်ပယ်က ပိုကျဉ်းပါတယ်။ မြို့တစ်မြို့ကို မီးလောင်ရင် အဲဒီမြို့ကိုပဲ ထိခိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခေတ်သစ် သတ်မှတ်ချက်နဲ့ ပြောင်းပြီး သတ်မှတ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ ဒီအထဲကို
၂။ ကမ္ဘာမြေပူနွေလာမှု နှစ်ခု ထပ်တိုးကြည့်ချင်ပါတယ်။
လျပ်စစ်မီးနဲ့ ပက်သတ်လို့တော့ ပြဿနာက တစ်ခုတည်းပါ။ မြန်မာပြည်မှာ လျပ်စစ်မီး မရခြင်း၊ မီးအား မမီခြင်း၊ မီးမမှန်ခြင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကို ချက်ချင်းသေစေနိုင်တာ မဟုတ်လို့ ဒါကို အန္တရာယ် (သို့မဟုတ်) ဘေးလို့ မထင်သူတွေ အများကြီး ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လျပ်စစ်မီး မရှိခြင်း၊ အားကိုးလို့ မရခြင်းဟာ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးကို နလန်မထူအောင် ဖိသတ်ထားတဲ့ ဧရာမအန္တရာယ်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လျပ်စစ်ဓာတ်အားကို ဘာဖြစ်လို့ “မီး” ရန်သူထဲ ထည့်ထားရတာလဲဆိုရင်တော့ အသုံးပြုပုံခြင်း တူလို့ပါ။
သဘာဝ ထင်းမီး၊ ဖရောင်းတိုင်မီးစသည်ကို အလင်းရဖို့၊ အပူရဖို့၊ အစားအစာ ချက်ပြုတ်ဖို့ အတွက် အသုံးချကြသလို ဒီနေ့ လျပ်စစ်ကိုလည်း ဒီအတိုင်းပဲ အသုံးပြုကြပါတယ်။ လျပ်စစ်က နယ်ပယ် ပိုပြီးတောင်ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ “ရေ” ပြတ်လပ်မှုကိုရေးဘေးလို့ ခေါ်ရင် “လျပ်စစ်မီး” မရှိမှုကိုလည်း “မီးဘေး” ထဲကို ထည့်ကို ထည့်မှ သဘာဝကျ ပါလိမ့်မယ်။(ကမ္ဘာမြေ ပူနွေးမှုကတော့ ကျယ်ပြန့်လွန်းလှတဲ့အတွက် လက်ရှောင်ထားခဲ့ပါတယ်။) ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်က လူတွေဟာ စက္ကန့်နဲ့အမျှ မီးဘေး (လျပ်စစ်မရ၊ စိတ်မချရ) အန္တရာယ် ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ။ ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ။
အရာရာကို လက်လွှတ်စပယ် လုပ်ခဲ့တဲ့ ရာစုဝက်ကျော်ကျော် အစိုးရတွေရဲ့ အမှားအယွင်းကို လက်ရှိ အစိုးရက ပြင်ဆင်ယူရမယ့် အချိန် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီမှာလည်း ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အသေးစိတ် မဆွေးနွေးနိုင်သလို ကျွန်တော်သိတဲ့ကိစ္စလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
“မင်း” ဆိုတဲ့ အစိုးရကို နောက်ဆုံးမှာ ဆွေးနွေးမှာမို့ ခိုးသူကို ကျော်လိုက်ပါ တယ်။ ရှေးခေတ် သတ်မှတ်ချက်အရ ခိုးသူ၊ ဓားပြ စတဲ့ အမျိုးမျိုးသော လူရမ်း ကားတွေကို “ခိုးသူ” လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒီခေတ်မှာတော့ ခရက်ဒစ်ကတ်ခိုးမှု၊ ကော်ပီရိုက် ခိုးမှု၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပိုင် ဆိုင်ခြင်း (Intellectual property) ကို ခိုးမှုတွေအပြင် ဓားပြနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက် (ISIS) လို အဖွဲ့တွေကိုပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားလို့ ရပါတယ်။ (တချိုက အစိုးရကိုတောင် ဓားပြအကြီးစားထဲ ထည့်ရမယ်လို့ ဆိုကြ ပါတယ်။ ဒါက မသင့်လှပါဘူး။ အစိုးရ ဆိုးပြီဆိုရင် လူ့အဖွဲ့အစည်း ပျက်စီးအောင် ဘယ်ဓားပြမှ သူတို့လောက် မလုပ်နိုင်လို့ပါ။)
ဒီဘေးရန်က ဘယ်သူတွေကို ထိခိုက်သလဲ။
သူခိုး၊ ဓားပြရန်ကလည်း သူတို့နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ဝန်ကျင်းကိုပဲ ထိခိုက်စေနိုင်လို့ အကျယ်အဝန်း ပမာဏအားဖြင့် အလွန်သေးမွှားပါတယ်။ (တချို့ကလည်း အကျင့်ပျက် လာဘ်စားတဲ့ အစိုးရ ဝန်ထမ်း တွေကို သူခိုးထဲထည့်လိုကြ ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သဘောမတူပါဘူး။ သူခိုး၊ ဓားပြဆိုတာ နေ့ခင်းကြောင်တောင် (မနက်ကိုးနာရီကနေ ညနေ ငါးနာရီအထိ၊ ရုံးဖွင့်ချိန်ပေါ် မူတည်ပြီး နာရီကွဲလွဲ သွားနိုင်)ကြီးမှာ တွေ့သမျှလူကို စားပွဲ ကုလားထိုင်နဲ့ ထိုင်ပြီး ထိုင်လု၊ ထိုင်ခိုး မလုပ်နိုင်လို့ပါ။ သူတို့ဟာ အစိုးရထဲမှာပဲ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီတော့ တတိယရန်သူဟာ ဆိုးတယ်၊ ဒါပေမဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးကို အန္တရာယ် မပေးနိုင်ဘူး။ မိုင်နာရန်သူပေါ့။ မေဂျာရန်သူ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီရန်သူကတော့ ရှေးခေတ်၊ ယခုခေတ် သတ်မှတ်ချက်အရ သိသိသာသာကြီး မကွဲပြားလှပါဘူး။ အများကြီးလည်း ဆွေးနွေးနေစရာ မရှိပါဘူး။ သားသမီး ဆိုးဟာ သူ့မိဘ၊ သူ့မိသားစု၊ နောက်ဆုံး သူ့ဆွေးမျိုးတွေကိုပဲ ဒုက္ခပေးနိုင်လို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အန္တရာယ် အကြီး စားကြီး မဟုတ်လှပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ပေါင်းမိပြီး ခိုးမှု၊ ရိုက်မှု၊ လုယက်မှု၊ ပုန်ကန်မှုတွေဆီကိုတော့ ရောက် သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါက တိုက်ရိုက် အကျိုးဆက်မဟုတ်လို့ ဒီမှာ ထည့်သွင်း စဉ်းစားဖို့ မသင့်တော်လှပါဘူး။
နောက်ဆုံးရန်သူက “မင်း” “ဘုရင်” “အစိုးရ” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မစွံတဲ့ အစိုးရဟာ ဂလိုဘယ်ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ (မီးနဲ့ ရေလို) သူဟာ သူ့နိုင်ငံ တွင်း၊ သူ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ အကြီးမားဆုံး အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေတဲ့ ရန်သူကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းဆိုးပြီးဆိုရင် မီးလောင်သလို ရွာလုံးကျွတ် သွားတာမျိုး၊ ရေကြီးသလို မြစ်ဘေးတင် ဒုက္ခ ရောက်ရတာမျိုး၊ သူခိုးဓားပြ ထူလို့ တစ်နယ်တစ်ရပ်ပဲ စိတ်ပူရတာမျိုး၊ သားသမီး မကောင်းလို့ တစ်မိသား စုတင် စိတ်ဆင်းရဲရတာမျိုး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ တစ်နိုင်ငံလုံး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးကို ဒုက္ခရောက်သွားစေတာမျိုးပါ။ ဒါကြောင့် မင်းဆိုးဟာ နိုင်ငံတွင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီး တစ်ခုလုံးရဲ့ ရန်သူ၊ အားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရန်သူ ဖြစ် သွားပါတော့ တယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆုံးအမအရ ရန်သူငါးယောက်ကို သက်ရှိ၊ သက်မဲ့လို့ ခွဲကြည့်နိုင်ပါတယ်။ (ယေဘုယျပေါ့)
ရေနဲ့ မီးက သက်မဲ့ ရန်သူတွေဖြစ်ပြီး ခိုးသူ၊ သားသမီးဆိုးနဲ့ မင်းဆိုးတို့က သက်ရှိတွေ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီနည်းအရ ကြည့်တော့လည်း သူခိုးဓားပြနဲ့ သားသမီးဆိုးတွေက မင်းဆိုးလောက် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဒုက္ခ မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတာ ထပ်တွေ့ရပါတယ်။
အချုပ်ဆိုရရင် ရန်သူငါးယောက်ရှိပေမဲ့ “မင်း” ဆိုတဲ့ ရန်သူလောက် ဘယ်သူ မှ ကြောက်စရာ မကောင်းဘူး။ သူ့ရဲ့ နယ်ပယ်ဟာ အကျယ်ဆုံး၊ သူဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ လူဦးရေက အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မင်းကောင်းရဖို့ ကိစ္စဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးအတွက် အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ မင်းကောင်းပေါ်ပါစေလို့သာ ဆုတောင်းမိပါတယ်။
၁၀၊ ၁၂၊ ၂၀၁၄
သူများကပြောတဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းဆိုတော့ နည်းနည်းပါးပါး ကြွားချင်တာပေါ့လေ
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 2/23/2015 - No comments
ရန်ကုန်က လူကြုံရောက်လာလို့ပါ။ မျက်စေ့နောက်သွားရင် ဆောရီးပဲ။
Face : ရှေးဟောင်းမင်္ဂလာတရားနှင့် ခေတ်သစ်ဆိုရှယ်ဒိုင်မင်းရှင်း
in စာအုပ်, ရှေးဟောင်းမင်္ဂလာတရားနှင့် ခေတ်သစ်ဆိုရှယ်ဒိုင်မင်းရှင်း - on 2/23/2015 - No comments
နောက်နေ့မှပဲ အစအဆုံး တင်တော့မယ်။ နေလို့ သိပ်မကောင်းလို့ပါ။
Labels: စာအုပ်, ရှေးဟောင်းမင်္ဂလာတရားနှင့် ခေတ်သစ်ဆိုရှယ်ဒိုင်မင်းရှင်း
လူ့ယဉ်ကျေးမှု ပဋိပက္ခ၊ ဒုတွဲ၊ စိတ်ကူးချိုချိုဆီက ပြန်လာပြီ
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 2/23/2015 - No comments
လူ့ယဉ်ကျေးမှု ပဋိပက္ခ၊ ဒုတွဲ၊ စိတ်ကူးချိုချိုဆီက ပြန်လာပြီ။ နောက်ဆုံးအကြိမ် ပရုဖတ်။ မကြာမီ ထွက်နိုင်ပါတော့မယ် (ဒါတောင် လပိုင်းတော့ ကြာဦးမှာ)
နားဝင်မချိုတဲ့ အမှန်တရားများ ကိုတော့ စထရိတ်တိုင်းမ် စည်းကမ်းတွေကြောင့် ကိုယ်တိုင်ပဲ ကမ်းလက်ကနေ ဖြန့်ရတော့မယ်။ စာအုပ်ဈေးကို ၄၀၀၀ ကနေ ၃၅၀၀ လျှော့ချပါမယ်။
နိုင်ငံရေး၊ သံတမန်ရေး၊ လက်နက်အထိ တရုတ်က ဖိအားပေးနေမှာ
ဒါတွေက အသစ်မဟုတ်သလို အဟောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။
နိုင်ငံရေး၊ သံတမန်ရေး၊ လက်နက်အထိ တရုတ်က ဖိအားပေးနေမှာ။
ရုရှားနဲ့ တရုတ် ရင်ဖွင့်ပေါင်းလို့မရတာလည်း ဒီအချက်ပဲ။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင် ကာချုပ်ရုံးက မှန်တယ်။ သမတရုံး မှားတယ်။
တရုတ်ကို ဒီပလိုမေစီကောင်းကောင်းနဲ့ ခပ်တင်းတင်းကိုင်မှ ရမယ်။ အဲဒါ အချုပ်အခြာ အာဏာပဲ။ မွတ်စလင်ခံမနေရင် အကြီးအကျယ် ပြသနာဖြစ်မှာက တရုတ်နဲ့အနောက်။ မြန်မာက တံခါးဖွင့်ပေါ်လစီကျင့်သုံးပြီးတဲ့နောက် တရုတ်ကို ဖားနေစရာ မလိုဘူး။
in အမှတ်တရ - on 2/22/2015 - No comments
ဒီနေ့ ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့်ပွဲမှာ ဘုန်းဘုန်း စီစဉ်ရေးသားတဲ့ 'မူအားဖြင့် နားလည်လိုက်ပါပြီ' တခန်းရပ်ပြဇာတ် ကောင်းတယ်ဘုရာ့
ကော်ပီရိုက်ကိစ္စ၊ အနုပညာနဲ့ ဖန်တီးမှုကိစ္စတွေကို လေးစားသလို လိုက်လည်းလိုက်နာသူတွေအတွက် ဘာမှမဖြစ်လောက်ပေမဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကို ကျေနပ်၊ တန်ဖိုးထားမှုကို ရိုကျိုးစွာ တောင့်တမိပါတယ်။ ဒီပြဇာတ်လေးကို ဓမ္မဂင်္ဂါနဲ့ကျနော် ရေးခဲ့တာပါ။ မူရင်းက "ကလေး နိုင်ငံရေး" ဆိုတဲ့ ကမ်းလက်ရဲ့ ပို့စ်ပါ။ Ref; The World Joke Book ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှစ်တစ်ရာပြည့် စာပေဟောပြောပွဲ (သစ္စာနီ)
- on 2/21/2015 - No comments
ဗိုလ်ချုပ်ရာပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မနက်ဖြန်ညနေ ၇ နာရီခွဲမှာ သူ ရေးသားလျက်ရှိသည့် အောင်ဆန်းဝါဒ အကြောင်း ဆရာက ပြောပါလိမ့်မည်။
February 22 at 7:54pm
၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂
Post by ကမ်းလက်.
ဒါကတော့ နေ့သန့်စင်ရာ အခန်းလေးပေါ့။ စာရေးလို့ကောင်းတယ်။ စကားပြောစရာရှိရင်တော့ အပြင်ထွက်ပြောလိုက်တယ်။
သစ္စာနီနဲ့အတူ သန္တရသလွင်ပြင်ကို ဖြတ်သန်းခြင်း
စင်္ကာပူရောက် ဆရာ့ပရိသတ်တွေအတွက် အထူး ရည်စူးပါတယ်။ ဘာသာရေးနေရာမှာ ဘာသာရေးပဲဖြစ်စေချင်လို့ "သန္တရသလွင်ပြင်" အကြောင်း လူငယ်တွေကိုပြောပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံမှုကို သဘောတူ လက်ခံပေးတဲ့ ဆရာသစ္စာနီကို ကျေးဇူးစကား ဆိုလိုက်ပါတယ်
အချိန်။ ။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နဲ့ ၂၂ ရက်၊ ညနေ ၇ နာရီခွဲမှ ၉ နာရီအထိ။
နေရာ။ ။ မင်္ဂလဝိဟာရကျောင်း၊ ချူကွင်ညို ခန်းမ။ (Mangala Vihara Buddhist Temple, 30, Jalan, Eunos, Singapore. 419495.)
လူဦးရေ ကန့်သတ်မှုရှိပါတယ်။ တက်ရောက်လိုသူများ အီးမေးလိပ်စာနဲ့တကွ ကမ်းလက်အီးမေးမှာ မှတ်ပုံတင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် (lek.camm@gmail.com)။ သိလိုတာကို ဖေ့ဘုတ် မက်ဆေ့ဘောက် (သို့) ကမ်းလက်အီးမေးမှ တဆင့် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
အီးမေးတောင်းခံရခြင်းက အကြောင်းတစ်ခုခုရှိလာရင် ချက်ချင်း သတင်းပေးပို့နိုင်ဖို့ပါ။
ဗီဇာမရခဲ့ရင် ချက်ချင်းအကြောင်းကြားနိုင်ဖို့ မှတ်ပုံတင်ဖို့၊ အီးမေးပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ အခု မည်သူ မဆို လာရောက်နိုင်ပါပြီ၊ တတ်နိုင်သရွေ့ နေရာစီစဉ်ပေးပါမယ်။
“သန္တရသလွင်ပြင်” ဆိုပြီး ဘာသာရေး ဆောင်းပါးတွေ ဘယ်လို ရေးဖြစ် ခဲ့တာလဲ ဆရာ...
အဲဒါဒဂုန်မဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးခဲ့တာ။ စာအုပ်အဖြစ် နှစ်အုပ် ထွက်သွားတယ်။ “ဖတ်ကြည့်ရင် သိလိမ့်မယ်”၊ “မျက်စိ ထဲက ဆူး“ တို့ ဘာတို့ပေါ့။ ပညာတတ်လူငယ်တွေ ဦးနှောက်ထဲ ဘာသာရေးအသိ ဝင်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ ခေါင်းစဉ် ပေးတာကအစ “ပန်းပွင့်ကိုယ်ပေါ်က သက္ကာလိပ်ပြာ” ဆိုတာမျိုး၊ လူငယ်ကြိုက်ပေးပြီး ရေးခဲ့တယ်။ လယ်တီ ဆရာတော် နဲ့ မိုးကုတ် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရဲ့ စာအုပ်တွေ အများကြီးရှိပေမဲ့ လူငယ်တွေကြားထဲ မရောက်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် လူငယ်တွေကို ဦးတည်ပြီိး အက်ဆေး ဆန်ဆန်လေးတွေ ရေးခဲ့တာ။ စရေးကတည်းက စရဏ၊ အဲဒီနောက် သီလ၊ သမာဓိခန်း၊ နောက်ဆုံး ဝိပသနာ အဆင့်ထိ ရောက်သွားတယ်။ သန္ထရသ လွင်ပြင်(၁) နဲ့ (၂)တောင် မတူဘူး။ (၂) က လူငယ်တွေ ဖတ်လို့ မရဘူး။ ဘာသာရေးဆိုတာ ဆုံးခန်းတိုင်အောင်ပြောမှ၊ ဒါနဲ့ပဲ နောက်ပိုင်းမှာ ကျယ်ပြန့်သွားခဲ့တယ်။
ကမ်းလက် shared Thitsarni Poet's post.
February 21 at 12:09pm ·
စင်္ကာပူ joo Enousရှိ
မင်္ဂလာဝိဟာရ သုံးထပ်ကျောင်းမမှာတည်းနေပါတယ်။အဲဒီကျောင်းထိုင် ဆရာတော်ဦးစိတရ္တက စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာ ဇင်ဝေသော်ပါ
"ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ ရန်သူကို အမြစ်ပါမကျန် တော်လှန်ခြင်းဖြစ်တယ်" လို့ မောင်းချဓားကလေးက အဆိုပြုတယ်။
"ဟင့်အင်း၊ ဟင့်အင်း။ မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး။ နှလုံးသားချင်း လက်ဆွဲနှုတ် ဆက်ပြီး ဦးနှောက်ချင်း အပေးအယူညှိယူတာမျိုးသာ ငြိမ်းချမ်းရေး အစစ်ဖြစ် တယ်"
လို့ ခေါင်းတခါခါနဲ့ ပန်းကလေးက ငြင်းသတဲ့။
ဒီကိစ္စ သူတို့ ဆွေးနွေလာလိုက်ကြတာကလည်း
မနက်စာ စားအပြီး ကျောင်းဝန်းကျင် တိုးရ်
ဇင်ဝေသော်၊ သစ္စာနီ၊ ဓမ္မဂင်္ဂါ။
ဆရာသစ္စာနီက ဘာတွေပြောလိုက်လို့ ဒီလောက်ရယ်မောလိုက်မိသည် မသိပါ
in အမှတ်တရ - on 2/20/2015 - No comments
ဆရာသစ္စာနီက ဘာတွေပြောလိုက်လို့ ဒီလောက်ရယ်မောလိုက်မိသည် မသိပါ။
သို့သော် အမိအရဖမ်းယူလိုက်နိုင်သော ဤဓာတ်ပုံကြောင့် (ဤမျှ) ဟက်ဟက် ပက်ပက် ရယ်မောလိုက်မိကြောင်း မဖြစ်မနေ ဝန်ခံရပါတော့မည်။
၂၀၁၅ သည် ကံကောင်းသော၊ ရယ်မောဖွယ်များသော နှစ်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါ သည်။
၆ ရက်ခန့်ကရောက်သော ဓမ္မဂင်္ဂါသည်လည်းကောင်း
ဆရာတော် ဓမ္မဂင်္ဂါ ပထမဆုံးနေ့ Home visit ကို လိုက်ပါချီးမြှောက်ပေးခဲ့
- on 2/20/2015 - No comments
ဆရာတော် ဓမ္မဂင်္ဂါ ပထမဆုံးနေ့ Home visit ကို လိုက်ပါချီးမြှောက်ပေးခဲ့သည်။ ဂေါပက ဥက္ကဋ္ဌမိသားစု။
ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ နွားချေး (Bull s..t)
မိတ်ဆွေရင်းလို့ သတ်မှတ်ရန် အနည်းဆုံး အကြောင်းသုံးရပ်
မိတ်ဆွေရင်းလို့ သတ်မှတ်ရန် အနည်းဆုံး အကြောင်းသုံးရပ် လိုအပ်သည်ထင်ပါသည်။
၁။ စကားပြောရတာ အဆင်ပြေခြင်း(နားလည်မှု ရှိခြင်း)
၂။ အခန်းထဲမှာ အမှိုက် ပိုရှုပ်ခြင်းနဲ့
၃။ ဒီနေရာထားတဲ့ပစ္စည်း ဟိုနေရာ ရောက်နေတတ်၊ ဟိုနေရာက ပစ္စည်း ဒီနေရာ ရောက်နေတတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
(ဆိုလိုသည်မှာ ခေါင်းအုံး၊ အိပ်ယာခင်းကို တသသလုပ်နေတတ်သော မိတ်ဆွေ၏ အိပ်ယာပေါ် တက်အိပ်ရန် ကျွန်ုပ်တုိ့ စိတ်မရဲတတ်ကြပေ)
လူဆိုတာ ဆိုဆိုက်တီး သတ္တဝါ (Society animal)
- on 2/19/2015 - No comments
"ဘယ်အဖွဲ့အထဲမှ မပါတဲ့" အဖွဲ့လေး ဖြစ်သွားတာပဲ။
လူဆိုတာ ဆိုဆိုက်တီး သတ္တဝါ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (အမေးအဖြေ)
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 2/19/2015 - No comments
(ထွက်သွားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ အမေးအဖြေ)
မေး ။ ။ မစ္စတာလီက အမည်ခံ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ တစ်ခါက ပြောဖူးတယ်နော်။ အခုလည်း ဒီအတိုင်းပဲလား။
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်တယ်။ အရင်အတိုင်းပဲ။ ငါက ခရစ်ယန်လည်း မဟုတ်၊ တာအို ဘာသာဝင်လည်း မဟုတ်ဘူး။ ငါက ဒီ ဘာသာနှစ်ခုထဲမှာ ဘယ်အထဲမှ ပါမနေဘူး။
မေး ။ ။ မစ္စတာလီ ပြောတဲ့ “ဓလေ့ထုံးစံ” ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။
ဖြေ ။ ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့မှာ မိဘဘိုးဘွားတွေကို အစားအသောက်တွေနဲ့ တင်ကြ၊ ပူဇော်ကြတာ စတာမျိုးပေါ့။ ငါတင်မြှောက်ပူဇော်ဖို့ အလုပ်သမားတွေ က စားပွဲပေါ် အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ပေးထားကြတယ်။ ငါ မရှိတော့ရင် ဒါတွေ လည်း ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါက Qing Ming လက်ထက်က သုဿာန်သွားပြီး ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပေးတာမျိုးပါ။ မျိုးဆက်တွေ ပြောင်းလာတာနဲ့အမျှ လုပ်ဆောင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လည်း နည်းနည်း လာတယ်။ ဒါက ဓလေ့ထုံးစံပေါ့။
မေး ။ ။ ဘာသာတရား မရှိဘူးဆိုရင် စိတ်သက်သာအောင် ဘယ်လို ဖန်တီး ယူသလဲ။
ဖြေ ။ ။ စိတ်သက်သာမှုဆိုတာ နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာတွေ အဆုံးသတ် မှုပေါ့။ ဘဝအဆုံး အပိုင်း (သေခြင်းတရား) အမြန်ရောက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်း မျှော်လင့်ရတာပဲ။ အသက် (၈၉) နှစ်မှာ နာရေးသတင်းတွေကို ဖတ်ရင်း ငါ့ထက် အသက်ပိုရှည်အောင် နေရတဲ့လူ တော်တော် နည်းတယ် ဆိုတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ ငါလည်း စဉ်းစားနေမိတယ်။ သူတို့ ဘယ်လိုနေပြီး ဘယ်လို သေခဲ့ကြပါလိမ့်၊ ဝေဒနာတွေ အကြာကြီး ခံစားခဲ့ကြရတာလား။ မလှုပ်နိုင်၊ မရှားနိုင် ဘဝနဲ့လား စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အသက် (၈၉) နှစ်မှာ ငှက်ပျော တုံးလို ဘဝနဲ့ ပိုက်ကနေ အစာသွင်း မခံချင်ရင် ဆေးပညာအရ ကြိုတင် လမ်းညွှန်မှု (AMD) လုပ်ထားဖို့ ငါကတော့ အကြံပေးမှာပဲ။ အသက်ကယ်ဖို့ ဆိုပြီး ဘာမှ မလုပ်ပါနဲ့၊ သဘာဝအတိုင်းပဲ သေပါရစေလို့ ပြောလိုက်။
မေး ။ ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးတော့ ရှိမှာပေါ့။ စင်္ကာပူမှာ ဒါမျိုး လုပ်လေ့လုပ်ထ သိပ်မရှိသေးဘူး။
ဖြေ ။ ။ အေးလေ၊ သူတို့က သေခြင်းတရားကို ကြိုတင် ရင်မဆိုင်ချင်လို့ နေ မှာပေါ့။
မေး ။ ။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ တရားဝင် ခွင့်ပြုထားတဲ့ “euthanasia” (ရောဂါ မခံစားရစေဖို့ ဆေးဝါး အကူအညီဖြင့် အဆုံးစီရင်ပေးခြင်း) ကို လက်ခံ တယ်ပေါ့။
ဖြေ ။ ။ လူတွေကို သိသိကြီးနဲ့ သတ်ပစ်တာ မဟုတ်ဘဲ ဝေဒနာ အသည်း အသန် မခံစားရအောင် လူနာကိုယ်တိုင်က ရွေးချယ်တာမျိုး ဆိုရင်တော့ ဒတ်(ခ်ျ) တွေလို “Yes” လို့ ဆိုရမှာပဲ။ ဒါကြောင့် ငါ့ရဲ့ ဆေးပညာကြိုတင် လမ်းညွှန်ချက်မှာ “သွားပါရစေတော့” လို့ ဆိုထားတာ။
မေး ။ ။ မစ္စတာလီရဲ့ မြေးတစ်ယောက်က "ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝဆိုတာ ဘယ်လို ဘဝလဲ" လို့ မေးလာရင် ဘယ်လို ဖြေမလဲ။
ဖြေ ။ ။ အသက်နှစ်ဆယ်ကျော်မြေးတွေ ငါ့မှာ ရှိတယ်။ သူတို့ကတော့ ဒီလို မေးခွန်းမျိုး ဘာမမေးဘူး။ သူတို့ကိုယ်တိုင် သိထားပြီးကြပြီးသားပဲ။ လူတွေနေထိုင်တဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုကမ္ဘာက ပြောင်းလဲနေသလို သူတို့ တွေ့ကြုံ ဆက်ဆံနေရတဲ့ လူတွေနဲ့အညီ မျိုးဆက်တိုင်းရဲ့ ဘဝရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်တွေလည်း ပြောင်းလဲလာတယ်။
မေး ။ ။ မစ္စတာလီ ဆိုလိုတာက လူငယ်တွေအပေါ် ပြောနေလည်း ဩဇာ သက်ရောက်မှု မရှိဘူး ဆိုလိုတာလား။
ဖြေ ။ ။ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့အသက် ဆယ့်ခြောက်၊ ဆယ့်ခုနှစ်နှစ်အထိ အခြေခံ သဘောတရားတွေကို သင်ကြားပေးလို့ ရတယ်။ တစ်ခါတလေ ဒီထက် လည်း စောမယ်၊ အဲဒီနောက် သူတို့စိတ်ကို သူတို့ ပိုင်သွားပြီ၊ သူတို့မြင်တွေ့ သမျှတွေ၊ သူတို့နဲ့ ခေတ်ပြိုင်တွေရဲ့ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပဲ သူတို့အပေါ်မှာ ရှိတော့ တယ်။
မေး ။ ။ နောက်ဘဝမှာ မစ္စတာလီရဲ့ ဇနီးကို တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ တွေ့ရမယ် ဆိုတာ မယုံကြည်ဘူး လို့ ဆိုခဲ့တယ်နော်။ တစ်ယောက်တည်း တိတ်တိတ် ဆိတ်ဆိတ် အချိန်မှာတောင် ဒီယုံကြည်မှုက ရှိနေဆဲပဲလား၊ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ မမျှော်လင့်ကောင်းဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ ဒီယုံကြည်မှုက ယုတ္တိမရှိဘူး။ နောက်ဘဝ ရှိတယ်ဆိုပါတော့၊ ဒါဆို ဘယ်နေရမှာ နောက်ဘဝက ရှိနေမှာလဲ။
မေး ။ ။ နာမ်ဘဝမျိုးနဲ့ပေါ့။
ဖြေ ။ ။ ဒါဆို တစ္ဆေသရဲတွေလိုပဲလား။ ငါတော့ မထင်ပါဘူး။
မေး ။ ။ မစ္စက်လီအကြောင်း မကြာမကြာ စဉ်းစားမိသလား။
ဖြေ ။ ။ သူ့အရိုးပြာအိုး ငါ့ဆီမှာ ရှိတယ်။ ငါသေပြီးရင် ငါ့အရိုးပြာအိုးကို သူ့အိုးနဲ့ အတူတူ ယှည်ထားဖို့ ငါ့ကလေးတွေကို မှာထားတယ်။ ဒါက ခံစားမှုသဘော သက်သက်ပါ။
မေး ။ ။ မျှော်လင့်ချက်ရော မရှိဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ မရှိပါဘူး။ သူလည်း မရှိတော့ဘူး။ သေသွားတဲ့နောက် ကျန်ရစ်ခဲ့တာ က အရိုးပြာအိုး တစ်လုံးပဲ။ ငါလည်းပဲ အရိုးပြာအိုးတစ်လုံး ချန်ထားခဲ့ပြီး သွားရမှာပဲ။ ခံစားချက်အနေနဲ့တော့ ငါတို့ အရိုးပြာအိုး နှစ်လုံး ယှဉ်တွဲထား တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဘဝမှာ အတူပြန်ဆုံဖို့ဆိုတာကတော့ တကယ်ဖြစ် လာဖို့ ခက်ခဲလွန်းလှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟိန္ဒူတွေကတော့ ဒါကို ယုံတယ် မဟုတ်လား။
မေး ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါက ဟိန္ဒူယုံကြည်မှုပါ။
ဖြေ ။ ။ ဒီဘဝမှာ ကောင်းကောင်းနေရင် နောက်ဘဝဟာ ပိုကောင်းတယ်၊ ကောင်းကောင်းမနေရင် ခွေးစသည် ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာမျိုးလေ။
မေး ။ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်း ဒါကို ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ ဒါပေမဲ့ ဟိန္ဒူတွေလောက် အယူပြင်းပြင်းထန်ထန် မရှိလှပါဘူး။
မေး ။ ။ ကက်ဘိနက်ထဲမှာ ရှိနေတုံးကနဲ့ နှိုင်းစာရင် ဒီနေ့ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းတွေ က တော်တော် ကွာခြားသွားသလား။
ဖြေ ။ ။ ကွာတာပေါ့။ အခု ဖိအား မရှိတော့ဘူး။
မေး ။ ။ ဒါပေမဲ့ မစ္စတာလီက အမြဲတမ်းလိုလို ဖိအားတွေကြုံရတိုင်း ကောင်းေ ကာင်းမွန်မွန် ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား။
ဖြေ ။ ။ အလုပ်ဖိအားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရတာမျိုးကို ခေါ်တာလေ။ တစ်ချိန် တည်းမှာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချစရာတွေ ပြိုင်ပြီး ရောက်လာရင် မွေးခွန်းတွေ ကို သေသေချာချာ စီစစ်ပြီး ဆုံးဖြတ်လိုရတာပါ။ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့နောက် နောက်ပြန်ဆုတ်လို့က မရတော့ဘူး။ ဖိအားချင်း မတူကြဘူး။
မေး ။ ။ အဲသလို ဖိအားတွေကို သတိမရဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ မရပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့် သတိရနေရမှာလဲ၊ ငါလုပ်ရမယ့်တာဝန်ကို လုပ်ခဲ့ပြီးပြီပဲ။
မေး ။ ။ ကက်ဘိနက် အစည်းအဝေးတွေ၊ လူငယ်ဝန်ကြီးတွေနဲ့ အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရတာမျိုးတွေကို သတိမရဘူးလားလို့ ဆိုလိုတာပါ။
ဖြေ ။ ။ သတိမရပါဘူး။ နေရာဖယ်ပေးရတော့မယ့် အချိန်ရောက်ပြီလို့ ထင်တယ်။ ငါ့အသက်က အခု (၈၉) နှစ်။ ငါတို့ ကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ ကမ္ဘာနဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကြည့်ရင် ပြောပြနေပုံအရ ငါ့ခေါင်းထဲမှာ စင်္ကာပူရဲ့ ပုံစံ၊ စင်္ကာပူရဲ့ တွေးခေါ် သုံးသပ်ပုံတွေက ပုံသေကြီး ဖြစ်နေပြီ။ စင်္ကာပူက ငါတို့ခေတ်နဲ့ မတူ ပြောင်းလဲနေတယ်။ လူနေရပ်ကွက်တွေထဲ ငါကိုယ်တိုင် သွားခဲ့တယ်။ ရပ်ကွက် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ သူတို့နဲ့ အပြန် အလှန် ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ လက်တွေ့ကျကျ ကွင်းဆင်းကြည့်ရတာကို ကျေ လည်း ကျေနပ်တယ်။ အခု ဒါမျိုးတွေ မရှိတော့ဘူး။ သူတို့သတင်းပို့သလောက်နဲ့ ပြီးနေရတယ်။ ဒီနှစ်ခုက လုံးဝ မတူဘူး။ ဒီတော့ ဒီတာဝန်ကို လက်တွေ့ကွင်းဆင်းနိုင်တဲ့ လူတွေရဲ့ လက်ထဲပဲ အပ်ခဲ့ရတော့ တယ်။
မေး ။ ။ ၂၀၁၁ - ခု ရွေးကောက်ပွဲကြီးအပြီး မကြာမီမှာပဲ အစိုးရအဖွဲ့ထဲ ကနေ နှုတ်ထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ခြင်းအတွက် နောင်တရော မရမိ ဘူးလား။
ဖြေ ။ ။ မရပါဘူး။ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံနိုင်တဲ့ စွမ်းရည် (ကျန်းမာရေး သန်စွမ်းမှု) မရှိဘဲ ဘယ်လိုလုပ် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနိုင်တော့မှာလဲ။ စိတ်ကျန်းမာရေးက ပြဿနာ မရှိဘူး။ ငါ့မှာ လေဖြတ်တာ၊ အတိတ်မေ့တာတွေ မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်က မပါတော့ဘူး။ အခု အင်တာဗျူး မလုပ်ခင်မှာပဲ နေ့လည်စာ အနည်းငယ်စား၊ စက်ပေါ်မှာ လမ်းလျှောက် ကျန်းမာရေးလုပ်၊ (၁၅) မိနစ် အနားယူခဲ့ရတယ်။ အရင်က ဒါမျိုးတွေ မလုပ်အပ်ခဲ့ဘူး။
မေး ။ ။ ဒီတော့ လုပ်ချင်လျက် မလုပ်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေ မရှိဘူးပေါ့။
ဖြေ ။ ။ မရှိဘူး။ စိတ်ကူးထဲ ရှိတာတွေ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဝန်ကြီးချုပ် ရာထူးကို ဂိုချောက်တောင် လက်ထဲ လွှဲအပ်ခဲ့တယ်။ သူ့ကို အကူအညီတော့ ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ သူကလည်း ဒီရာထူးကို လီရှန်လွန်းလက်ထဲ လွှဲအပ်ခဲ့ပြန်တယ်။ အခု မျိုးဆက်က ငါ့မျိုးဆက်နဲ့ မတူတော့ဘူး။ ငါ့အကူအညီတွေကလည်း အရင်လောက် အဓိပ္ပါယ် မရှိတော့ဘူး။ သူတို့ တရုတ်တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားနဲ့ တီဗွီအစီအစဉ်တွေ ပြန်လွှင့်ဖို့ စိတ်ကူးတာမျိုးက လွဲရင်ပေ့ါ။
လောက၌ တရုတ်လေးမျိုး ရှိလေရာ၏။ အဘယ်လေးမျိုးတို့နည်းဟူမူ
၂။ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်တရုတ်၊
၃။ စင်ကာပူ စသည်တရုတ်
၄။ မလေး၊ အင်ဒို၊ မြန်မာတရုတ်တို့တည်း။
ယင်းတို့တွင် နံပတ် ၄ သည် စိတ်နေသဘောထား အဖြူစင်ဆုံးဟု စလုံးတို့ကိုယ်တိုင် ၀န်ခံကြလေ၏။
(အထက်သို့ အစဉ်အတိုင်း မှတ်လေ)
ကျမ်းကိုး။ အင်တာနက် နိကာယ်၊ ဖေ့စ်ဘုတ် ၀ဂ်၊ စလုံးသုတ်။
3-Day Introductory Course on Vipassanã at Mangala Vihara
in ဘာသာရေးသတင်း, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 2/19/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Kalay Ma's album.
February 19 at 12:29pm ·
Labels: ဘာသာရေးသတင်း, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း
February 19 at 9:50am ·
"ဟက်ပီး လူနာ နယူးယီးယား"
အမေရိကမှာ ခရစ်ယန်မဟုတ်တဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေကို အားနာလို့
"မေရီ ရစ္စမတ်" လို့ပြောဖို့တောင် လျှတွန့်လာတယ် ဆိုတဲ့ သရော်စာလေးကို သတိရတယ်။
အခုလည်း တရုတ်မဟုတ်တဲ့ လူမျိုးတွေကို အားနာလို့ "ဟက်ပီး ချိုင်းနီးစ် နယူးယီးယား" လို့ မပြောဘဲ "ဟက်ပီး လူနာ နယူးယီးယား (Happy Lunar New Year) လို့ပြောရင် ပိုသင့်မယ်။
ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အစွန်းလွတ်အောင်
"ဟက်ပီး လူနာ နယူးယီးယား" ပေါ့။ တစ်ခုခုတော့ ပြောမှရမယ် မဟုတ်လား။
ယူနီကုတ်ကို သဘောမတွေ့လို့ ကော်ပီကူးပြီး တင်ပါရစေဘုရား။
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 2/18/2015 - No comments
February 18 at 8:38pm ·
- on 2/18/2015 - No comments
အလွှာပေါင်းစုံက စာဖတ်သူ လူတန်းစားတွေကို ဖေ့စ်ဘုတ်က ရုတ်တရက် ကြီး ပေါင်းစပ်ပေးလိုက်တော့ ခံယူချက် မတူညီမှု၊ တွေးတော သုံးသပ်ပုံ အတိမ်အနက် စတာတွေ သိသိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်။ နောက် တုန့်ပြန်ခွင့်ပါပေးထားတော့ ဒီ ကွာဟမှုက ရုပ်လုံးပိုကြွလာပြန်တယ်။ ရေရှည် မှာတော့ အသားကျသွားစရာ ရှိပါတယ်။ အခုထိတော့ စိတ်ဓာတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု အား နည်းတဲ့ ဘာသာစကားတွေမှာ ဆဲသံတွေ ထူနေဆဲပဲဖြစ်နေနိုင်တယ်။ ဆဲဆိုမှု၊ ဒေါသတကြီးတုန့်ပြန်မှုတွေ သီဟိုဠ်တွေဆီမှာ အတော်နည်းတာ တွေ့ရတယ်။
အမေရိကန်ေ ဒ်ါလာရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး
အမေရိကန်ေ ဒ်ါလာရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ စင်္ကာပူဒေါ်လာ နွမ်းနေရင်လည်း ငွေလဲလို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒါက ကိုယ်တွေ့ပါ။ ဆရာသမားဆီမှာ လဲလို့မရတဲ့ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၅၀ တန်နှစ်ရွက် ရှိနေဆဲလို့ ထင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် ဖြစ်နိုင်တာက ဒေါ်လာတန်ဖိုးက သိပ်မြင့်နေခြင်း၊ မိမိလဲပေးလိုက်တဲ့ ဒေါ်လာက တစ်ခုခုဆိုရင် သူတို့စိုက်လျော်ရမယ့် ပမာဏက ဘဏ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် သိပ်များနေခြင်းကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒေါ်လာအရွက်ကြီးလေလေ သစ်ဖို့လိုလေလေ သဘောပေါ့။ ဘဏ်အလုပ်သမားတွေရဲ့ စိုးရိမ်မှု၊ ဒီလို စိုးရိမ်မှုမရှိရအောင် သူတို့ကို အာမခံပေးထားတဲ့ စနစ်မရှိမှုကြောင့်လို့ ဆိုရင် မှန်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
ကမ်းလက် shared The Melting Pot4U's video.
February 18 at 4:14pm ·
Post by The Melting Pot4U.
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 2/18/2015 - No comments
(ကော်ပီရိုက် သဘောတူညီမှုအတွက် ညှိနှိုင်းနေပါပြီ။ ပြီးတာနဲ့ "လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင်" ထွက်ဖို့ပါပဲ။ ဘာသာပြန်ဆိုလို့ ပြီးသွားပါပြီ။)
နှစ်ပေါင်း တစ်ရာအတွင်းမှာ ကမ္ဘာဟာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ပြောင်း လဲခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် ကလေးဘ၀ ၁၉၂၀ ၀န်းကျင်တုံးက ဘဒုတ်(Bedok) ကနေ (Chai Chee) ချိုင်ချီးမှာ ရှိတဲ့ အဖိုးရဲ့ နှစ်မိုင်အကွာ ရာဘာခြံကိုရောက် ဖို့ နွားလှည်းနဲ့ နှစ်နာရီကြာအောင်သွားခဲ့ရတယ်။ ပိုပြီး အံ့သြစရာ ကောင်း တာက ဒီနေ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းပါ။ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွေတုံးက စာဖတ်ချင်တဲ့ ကျေုာင်းသားလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အင်္ဂလန်ကနေ ငါးရက်၊ ခြောက်ရက်၊ တစ်ပတ် ကြာအောင် မောင်းနှင်ရတဲ့ သင်္ဘောဆိုက်ရောက်ချိန်ကို မျှော်နေခဲ့ရတယ်။ သင်္ဘောက ကြာသပတေး (သို့) သောကြာနေ့တွေမှာဆိုက်ရောက်တတ်ပြီး သူနဲ့အတူ လူငယ်ဂျာနယ် ( boys –journals )တွေ ပါလာတတ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ စာတစ်စောင်က ဂျက်လေယဉ်တွေနဲ့ သယ်ဆောင်တာမှို့ ဒီကိုရောက်ဖို့ နာရီပိုင်းပဲ ကြာပါတော့တယ်။ ဒါတောင် စာကိုစိတ်ဝင်စားသူ သိပ်မရှိလှတော့ ပါဘူး။ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ၊ အင်တာနက်တွေကနေ ဓာတ်ပုံ၊ သတင်းစကား၊ အီးမေးတွေကို လက်ဖြစ်တစ်တွက်အတွက်း ပို့နိုင်၊ သတင်းပြန်နိုင်နေကြပါပြီ။ ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာ လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ကြိုတင်မမြင်နိုင်ခဲ့ပါ ဘူး။ စင်္ကာပူရဲ့ အပြောင်းအလဲကို ကြိုတင်သိမြင်ဖို့ဆိုတာ ပိုလို့တောင် အလှမ်းဝေးနေပါသေးတယ်။
ဒါဆိုရင် လာမယ့်အနာဂတ် နှစ်ငါးဆယ်မှာ ကမ္ဘာက ဘယ်ပုံစံ ဖြစ်နေ မလဲ။ လာမယ့်အနှစ်ငါးဆယ်မှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဒီထက် ပိုမြန်ဆန်လိမ့်မယ် ဆိုတာကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ တိတိကျကျ အဖြေမထုတ်နိုင်ပါဘူး ။ ဒီတော့ လာမယ့် ၁၅ နှစ်နဲ့ အနှစ် ၂၀ အတွင်း ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို တစ်ချို့ အဖြစ်ပျက်တွေကို အချေခံပြီး ခန့်မှန်းခြင်းက ပိုလက်တွေ့ကျပါတယ် ။ ဒါတောင် မရေရာမှုတွေ အများကြီးပါ ။
ဒီစာအုပ်ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကမ္ဘာပေါ် အမြင်ဖြစ်ပြီး မဝေးလှတဲ့ အနာဂတ်မှာ ယှဉ်ပြိုင် လာနိုင်တဲ့ အင်အားစုတွေ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်၊ ဒါတွေရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေဆိုတာကို ကျကျနန နားလည်သဘောပေါက်ထားခြင်းဟာ အနာဂတ်မှာ ဘာတွေဖြစ် လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို အဖြေထုတ်ဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေ ဖြစ် ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ နားလည်သဘောပေါက်မှုဟာ နှစ်ငါးဆယ်အတွင်း ကျွန်တော် တွေ့ဆုံဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့ လူတွေဆီက အတွေ့အကြုံနဲ့သင်္ခန်းစာ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပေါ်မှာ အခြေခံ ပါတယ်။ ဒီနှစ်တွေတွင်း စင်္ကာပူရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးရာ ပေါ်လစီနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ဒီနေ့ ကမ္ဘာ ရဲ့ ပြသနာကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနေကြရတဲ့ အဓိက ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်၊ သူတို့ဆီက လေ့လာခွင့်တွေ ကျွန်တော် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု အများဆုံး ရောက်ရှိသွားနိုင်တဲ့ နိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံကတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနဲ့ တရုတ်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စင်္ကာပူအနေနဲ့ ဥရောပ၊ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယား ၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေ။ အိန္ဒိယ အရှေ့ အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ဖို့ကိုလဲ တတ်နိုင်သလောက် ကြိုး စားယူရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီနိုင်ငံတွေကြားမှာ ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင်နိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ဒါတွေကြောင့် အနာဂတ် အကျိုးဆက် ဘယ်လိုရှိနိုင်တယ် ဆိုတာကို (ဒီစာအုပ်မှာ )ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
စင်္ကပူကတော့ ကမ္ဘာကိုအရှိတိုင်းပဲ လက်ခံထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲ ပေးဖို့ စင်္ကပူက အလွန်သေးငယ်လွန်းလှပါတယ်။ ဒါပေ မဲ့ ဒေသတွင်းက နိုင်ငံကြီးတွေရဲ့အကြားမှာ ကျွန်တော်တို့ ရှင်သန် ရပ်တည် ခွင့် နယ်ပယ် အကျယ်ပြန့်ဆုံးရရှိအောင်တော့ ကြိုးစားယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်ဖြစ်ပြီး ဒီဦးတည်ချက်အတိုင်းခရီးဆက်ဖို့လည်း ကြိုးစားအားထုတ် သွားရမှာဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံတွင်းမှာတော့ စင်္ကာပူအောင်မြင်မှု ကို အရည်အသွေးသုံးရပ်နဲ့ ဖော်ဆောင် သွားနိုင်ပါတယ်။
၁ ။ နေထိုင်ဖို့နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် လုံခြုံအေးချမ်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေအောင် ကြိုးစားအားထုတ်မှု
၃ ။ မျိုးဆက်တိုင်းမှာ ဒီအောင်မြင်မှု ဆက်လက်ရှင်သန်နေအောင် စနစ်တကျ စီမံအကောင်အထည် ဖော်ပေးမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ဆောက်ယူခဲ့ရတဲ့ အခြေခံ အချက်သုံးချက် မရှိဘူးဆို ရင် လက်ရှိ ခံစားနေရတဲ့ အသီးအပွင့် တွေလည်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူး။ စင်္ကပူနိုင်ငံထဲကို လာရောက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံတဲ့ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပစိးပွားရေ သမားတွေအနေနဲ့ စင်္ကပူကိုယုံကြည်စိတ်ချနေကြရပါမယ်။ အထက်ပါ အချက် သုံးချက်ရှိနေမှ သူတို့ကယုံကြည်ပြီး ကျွန်တော်တို့အနာဂတ် ခရီးကို အရှိန် မပျက် ခရီးဆက်သွား နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကသာ ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်း ကမ္ဘာနဲ့ ချိတ်ဆက်မထားနိုင်ဘူးဆိုရင် ကျွန်တော်တို့လည်း ကမ္ဘာအပြင် ရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
in ဘာသာရေးသတင်း - on 2/18/2015 - No comments
ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် အသံမစဲ မဟာပဋ္ဌာန်း ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ပွဲ
ကျွန်တော်/မတို့ အဘိဓမ္မာအသင်းကြီးမှ လူပုဂ္ဂိုလ်များသာလျှင် စုပေါင်းရွတ်ဆို ပူဇော်ကြသည့် အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်း ပူဇော်ပွဲကို နှစ်စဉ်ကျင်းပ ပြုလုပ်လာခဲ့သည်မှာ ယခုနှစ်ဆိုလျှင် ပဉ္စမအကြိမ်သို့ပင် တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ယခုနှစ်တွင်လည်း ယမန်နှစ်များနည်းတူ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက် ကာလတွင် အစဉ်အလာမပျက် ကျင်းပပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ အဆုံးမရှိ ကုန်အောင်သိသည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဉာဏ်တော်ဖြင့်သာ ကျက်စားရာဖြစ်တော်မူသော ကြီးကျယ် မြင့်မော် ဤပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးအား တစ်သက်တစ်ခါ ကြုံရသည့်အခိုက်အခါတွင် ကျွန်တော်/မတို့နှင့်အတူ ပါဝင်ကုသိုလ်ယူ ပူဇော်နိုင်ကြစေရန်အလို့ငှာ နိဗ္ဗာန်ကို အကျိုးမျှော်၍ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
နေ့ရက်။ ။ ၁၈-၀၂-၂၀၁၅ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှ ၂၂-၀၂-၂၀၁၅ ခုနှစ် တနင်္ဂနွေနေ့ အထိ။
ဖွင့်ပွဲအချိန်။ ။ ၁၈-၀၂-၂၀၁၅ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေ ၈း၀၀ နာရီ။
Phone : 92770249 (မသန်းလဲ့ခိုင်) ၊ ကိုဇော်ကြီး (96926165) ၊ မမူယာနွဲ့ (81800620) ၊ မခင်စန်းယု (82986297)
Email : contact@abhidhammasociety.com
ပါဝင်ပူဇော်လိုသူများအနေဖြင့် ဖော်ပြပါ အကျိုးဆောင်များထံ ဖုန်းဆက်၍ သော်လည်းကောင်း၊ SMSပို့၍ သော်လည်းကောင်း၊ အီးမေးဖြင့်သော်လည်းကောင်း စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြပါသည်။
မဟာပဋ္ဌာန်းရွတ်ဆိုပူဇော်လိုပါက ဤနေရာတွင်မိမိပူဇော်နိုင်မည့်အချိန်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မဟာပဋ္ဌာန်း ( ၅ ) ကျမ်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရန် လေ့ကျင့်ခန်းများ (အရှင်စက္ကပါလ ၊ အရှင်ဝိလာသဂ္ဂ (ပျော်ဘွယ်) )
မဟာပဋ္ဌာန်း(၅)ကျမ်း စာမျက်နှာအလိုက် အသံဖိုင်များ
သံဃာတော်များ : ပထမတွဲ ၊ ဒုတိယတွဲ ၊ တတိယတွဲ ၊ စတုတ္ထတွဲ ၊ ပဉ္စမတွဲ
ဦးလေးဦးခင်မြင့် : ပထမတွဲ ၊ ဒုတိယတွဲ ၊ တတိယတွဲ ၊ စတုတ္ထတွဲ ၊ ပဉ္စမတွဲ
Version 1 (ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးသည်။ Source: dhammadownload)
ပထမတွဲ (1.34 MB) ၊ ဒုတိယတဲ (47.7 MB) ၊ တတိယတွဲ (24.1 MB) ၊ စတုတ္ထတွဲ (21.8 MB) ၊ ပဉ္စမတွဲ (41.7 MB)
Version2(ဖိုင်ဆိုဒ်သေးသည်၊ အညွှန်း ကိန်းဂဏန်းများပါရှိသည်။)
ပထမတွဲ (1.54 MB) ၊ ဒုတိယတွဲ (1.71 MB) ၊ တတိယတွဲ (2.10 MB) ၊ စတုတ္ထတွဲ (2.14 MB) ၊ ပဉ္စမတွဲ (1.34 MB)
သူများကပြောတဲ့ ကိုယ့်အကြောင်းဆိုတော့ နည်းနည်းပါးပါ...
Face : ရှေးဟောင်းမင်္ဂလာတရားနှင့် ခေတ်သစ်ဆိုရှယ်ဒိုင...
လူ့ယဉ်ကျေးမှု ပဋိပက္ခ၊ ဒုတွဲ၊ စိတ်ကူးချိုချိုဆီက ပြန...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှစ်တစ်ရာပြည့် စာပေဟောပြောပွဲ (...
ဆရာသစ္စာနီက ဘာတွေပြောလိုက်လို့ ဒီလောက်ရယ်မောလိုက်မိ...
ဆရာတော် ဓမ္မဂင်္ဂါ ပထမဆုံးနေ့ Home visit ကို လိုက်ပါခ...
3-Day Introductory Course on Vipassanã at Mangala ...
ယူနီကုတ်ကို သဘောမတွေ့လို့ ကော်ပီကူးပြီး တင်ပါရစေဘု...
မနှင်းဝေအောင်နဲ့ နားဝင်မချိုတဲ့ အမှန်တရား
ပဟေဠိဆန်ဆန် ဖင်လန်က စက်ရုပ် လေးများ
စာမကျက်ရဘဲ တော်နေတဲ့ ကလေးတွေက ဖင်လန်က ကျောင်း သားတွေ
ဆိုရှယ် ဘာသာရေး၊ သာသနာပြု
အရေးကြီးသော ဆွေးနွေးမှုများ သဘောတူညီမှု ရသွားသည်ဆိုရ...
.•• ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ သူတို့ အမြင် ••.¸
ဟက်ပီး ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့လွန် တစ်ရက်
ကျနော်နဲ့ နောက်တောက်တောက် အမှန်တရားများ
ဒီနေ့ ရှယ်တဲ့အလုပ်လုပ်မယ်။ ကျောင်းသားတွေ ကြိုက်တဲ့...
Zin Wai Thaw is going.
ဒါက အတည်လား၊ နောက်တာလား
ဘာသာစကား၊ စနစ်နဲ့ ပညာရေး
ပွဲဦးထွက် "စု" ဋီကာ (ဆရာသစ္စာနီပေးတဲ့ ခေါင်းစဉ်)
ဒီမှာလည်း တန်ပြန်ဆန္ဒပြမှု တဲ့
1 to ten. Quite nice!
မလိုအပ်တာဆို မလုပ်တာက ပိုကောင်းမလား လို့
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ စီးပွားရေး အက်သစ်
ဓမ္မာစရိယရဟန်းသာမဏေများအတွက် အထူးသင်တန်း (ဓမ္မဂင်္ဂါ)
တို့နိုင်ငံရဲ့ လတ်တလော သမိုင်း
ဝှိုက်ကပ်ကိစ္စရဲ့ သဲလွန်စလို့ ယူဆရင်
ချွင်းချက်နဲ့ "စံ"၊ ဘာကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲ ရပ်သွားရသလဲ
မစုပုံချစ်ကတော့ ကျုပ်တို့လို ကျားကိုးစီးစားကြီးတွေ...
စနစ်က မကောင်းတော့လို့လား စနစ်ကို ချဉ်းကပ်တာ မမှန်လ...
ဒါတွေကြောင့် နိုင်ငံ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတာ
အဲဒါ သစ္စာနီ တဲ့။ စင်္ကပူ၊ ၂၂ ရက်နေ့ တွေ့ရအောင်။